UYILO OLUBIYELWEYO KUNYE NEMIBONO [IZITAYILE ZANGAPHAMBILI NANGASEMVA KWENDLU] - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Uyilo olubiyelweyo kunye nemibono [Izitayile zangaphambili nangasemva kwendlu]
Uyilo olubiyelweyo kunye nemibono [Izitayile zangaphambili nangasemva kwendlu]
Le galari inezinto ezithandwayo zoyilo olucwangcisiweyo lweyadi engaphambili kunye nasemva kwendlu. Ukukhetha ucingo oluchanekileyo kubalulekile njengoko kuchaphazela ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwendlu kunye nesibheno somda wayo. Xa kufikwa ekukhetheni isitayile esifanelekileyo kukho izinto ezininzi ekufuneka zenziwe.
Apha ngezantsi uyakufumana ubuhle kunye neengozi zohlobo ngalunye kwaye ufumane izimvo zocingo zokukunceda ukhethe eyona ilungele ikhaya lakho.
Xa ukhetha ukuba loluphi uhlobo locingo oza kulifaka kwixabiso lalo ukuze uqwalasele ngononophelo umsebenzi walo ophambili. Ucingo olwakhiwe kakuhle lunokusebenza njengendawo ejikeleze umgca wepropathi yekhaya lakho. Inokwenza ubumfihlo kwiyadi yakho, kunye nokugcina abantu ngaphandle kwaye uncede ukubonelela ngokhuseleko kubangeneleli.
Uninzi loyilo loyilo luluncedo ekugcineni izilwanyana zasekhaya zikhuselekile emva kwendlu yakho, kuthintela izilwanyana ukuba zingene egadini, okanye ukubonelela ngokhuseleko kuthango lwasemva kweephuli. Ukuba ucingo yeyadi engaphambili kuyakufuneka ukuba ijonge ukubukeka kwekhaya lakho kwaye itshatise indlela yoyilo ngokubanzi.
Lo mfanekiso ungasentla ubonakalisa ucingo olumhlophe olumgangatho kumakhaya amaninzi asezidolophini. Uyilo olubiyelweyo lokubiyela olumhlophe luhlelwe kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo kulandela ulwandlalo lwe-wavy olubumba ingca engaphambili kwaye ikhokelele endlwini.
Iinkcukacha zokuThengwa kocingo
Iindleko zocingo lweenkuni
Iiphaneli zocingo zomthi
Ucingo lwale mihla
Uyilo loBiyelo lwedesika
Ungalwakha njani ucingo
Indlela yokucinezela uhlambe ucingo
Iiphaneli zocingo zeVinyl
Uyifaka njani iVinyl Kucingo olubiyele
Metal Kucingo olubiyele
Kwenziwe intsimbi yokubiya
Ukwahlula iTreyini yoLoliwe
Kucingo olubiyele iinyamakazi
Ephakamileyo, eqinile kwaye efikelelekayo, ukhuni lomsedare lukhetho olufanelekileyo lokubiya. Ngombala omthubi, ibonelela ngombala endlwini, njengoko kubonisiwe apha, nokuba isikiwe kwaye yabekwa kuyilo olulula. Umthi womsedare nawo kulula ukusika kunye nebala, ke abathanda i-DIY baya kuwufumana lo mthi ube mnandi kwaye kulula ukusebenza nawo.
Iindleko zokufakwa kocingo ziyahluka ngokuxhomekeka kwindawo okuyo, ukhetho lwezixhobo kunye neendleko zabasebenzi. Ngokubanzi, ukubiyela kuxabiswa ngeenyawo zomgama, kwaye ukuba uyazifaka okanye uqasha isixhobo sokufaka ucingo siya kumisela uninzi lweendleko zakho zokugqibela.
Abo banqwenela ukufaka ucingo ngokwabo banokufumana iipaneli ezenziwe kwangaphambili ukwenza umsebenzi ube lula. Iindleko zeepaneli zingahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lwezixhobo ezisetyenzisiweyo.
Umzekelo ipaneli yocingo lweenkuni eDepho yasekhaya okanye eLowe's inokubiza malunga ne-100 leedola nge-6ft nge-6ft iphaneli ye-redwood yasentshona okanye uxinzelelo oluphathwe ngeplanethi yomsedare.
Ukukhetha ukubiya ngeendleko ngokufanelekileyo lukhetho oluthandwayo kwabo banommandla omkhulu. Umzekelo olungileyo wento ebiza ixabiso eliphantsi kukudibanisa ikhonkco kwi- $ 7 a linear ft.
Ukubiywa kweenkuni kungahluka ngokweendleko kuxhomekeka kuhlobo lomthi osetyenzisiweyo ngokomyinge we-12 yeedola.Ukubiyela iVinyl kubiza kakhulu kuneenkuni ezikwi- $ 17 nge-ft. Ukubiyelwa kweAluminiyam kubiza kakhulu kwi-25 yeedola.
Iindleko zokufakela iingcingo ziyahluka ngokuxhomekeke kukhetho lomntu. Ngaphambi kokuba uqale ukubeka ucingo, kubalulekile ukuqwalasela oku kulandelayo:
Izahlulo-unokuzifumanela ngokwakho okanye unokuthenjwa kwikontraki yocingo ngeentlawulo.
Amaphepha-mvume - kubalulekile ukukhangela kumasipala ukuba imvume iyimfuneko na. Ixabiso eliphakathi lemvume yokwakha limalunga ne- $ 800.
Izixhobo - iqinisekisa ukuba ucingo aluphazamisani nezinye iinkonzo ezinje ngeengcingo ezingaphantsi komhlaba okanye imibhobho. Ungatsalela umnxeba ku-811 ngoncedo lokuthintela iindleko ezingafunekiyo kumonakalo.
Ukubekwa kumgangatho othile - jonga umhlaba kuba kokukhona uthambeke kakhulu kokukhona iya kukuxabisa ngakumbi kufakelo locingo.
Intlawulo yabasebenzi ibandakanya abasebenzi kunye nezixhobo kunye nokutshaja izinto kuhambelana neenyawo zomgama.
Iindleko zocingo ziyahluka ngokuxhomekeka kwisitayile kunye nobungakanani. Apha ngezantsi kukho iindleko eziqhelekileyo zokubiyela:
Ucingo lomthi - indleko zayo ziyahluka ngohlobo lomthi osetyenziswayo. Ukufakwa kwe-DIY, kungabiza ukusuka kwi-3 ukuya kwi-9 yeedola ngeenyawo kwifowuni yesitayela sefama. Ngocingo olusisiseko lwe-6 'lwamacingo abucala, kuya kuxabisa i-10 ukuya kwi-30 yeedola ngonyawo lofakelo lobungcali.
Ikhonkco lokudibanisa ikhonkco - ilungele isiseko esineendleko ezifanelekileyo. Ixabiso layo liyatshintsha kuxhomekeke kwiindleko zentsimbi. Ukufakwa kwe-DIY kuhlala kubiza i-3 ukuya kwi-6 yeedola ngeenyawo ezingaphakamanga ukuya kwi-4 'ephezulu. Ukuphakama kwe-6, kubiza phakathi kwe-8 ukuya kwi-15 unyawo. Amasango anjenge-100 'yocingo anokuxabisa i-400 ukuya kwi-2,000 yeedola xa usenza ngokwakho. Ukufakwa kobuchwephesha kuya kuba sele kubiza i-5 ukuya kwi-35 yeedola ngeenyawo okanye i-600 yeedola ukuya kwi-4,000 yeedola kwi-100 'yokubiya. Olu hlobo locingo luhlala ixesha elide nangona lungenalo uyilo oluhle lobugcisa.
Ucingo olukiweyo - alubizi mali ininzi nolondolozo olusezantsi. Yenziwe ngomnatha wocingo oqukethe imigca ethe tyaba kunye ethe nkqo. Isetyenziselwa ukumakisha imigca yepropathi okanye ukugcina izilwanyana okanye imfuyo ngaphakathi nangaphandle. Iindleko zayo malunga ne- $ 0.40 ukuya kwi-1.50 yeenyawo ngenyawo kwizinto ze-DIY okanye i- $ 350 ukuya kwi-1,300 yokufaka ihektare. Indleko yofakelo lobuchwephesha yi- $ 1.50 ukuya kwi-4 yeedola ngeenyawo okanye malunga ne- $ 1,300 ukuya kwi- $ 3,400 ngehektare nganye.
Umtya wocingo oNgeyiyo ombane - usetyenziselwa ukulawula imfuyo ebiza i- $ 0.25 ukuya kwi-1.50 yeenyawo ngenyawo kufakelo lwe-DIY okanye malunga ne- $ 225 ukuya kwi- $ 1,300 yokufaka ihektare elula emalunga nama-830 '. Ukufakwa kobuchwephesha kubiza i-0.50 ukuya kwi-4 yeenyawo ngeenyawo okanye malunga ne-450 ukuya kwi-3,500 zama-dollar kwi-acre ebiyelweyo.
Ucingo oluBanzi oluQinisekisiweyo - kusetyenziswa ukulawula imfuyo okanye izilwanyana zasendle ezixabisa i-0.05 ukuya kwi-0,75 yeedola kwi-foo okanye kwi-50 ukuya kwi-650 yeedola yokufaka ihektare. Ukufakwa kobuchwephesha kuya kubiza i-0.20 ukuya kwi-3 yeenyawo ngeenyawo okanye i-200 ukuya kwi-2 500 yeedola ukufaka i-acre.
Ucingo lweVinyl- lucingo olubizayo apho iindleko zokufaka i-diy yocingo lwesitayile se-ranch zimalunga ne- $ 4 ukuya kwi- $ 12 kwaye malunga ne- $ 15 ukuya kwi-70 yeenyawo ngonyawo lwe-6 'yabucala yabucala.
Isimbo sokubiyela esenziwe ngesinyithi - sihlala senziwe ngealuminiyam okanye ngentsimbi exabisa i $ 20 ukuya kwi-100 yeedola ngonyawo. Kuza kubiza i- $ 2,500 ukuya kwi-11,000 yeedola kwi-DIY 100 'yocingo enesiseko sokungena esangweni. Ukufakwa kobuchwephesha kuxabisa i-30 ukuya kwi-300 yeedola ngeenyawo okanye malunga ne-3,500 yeedola ukuya kwi-35,000 yeedola kwi-100 'yocingo oluhamba ngesango.
Ukubiyelwa ngokudibeneyo- Okuninzi kokufana nokuthungwa komthi, ucingo oludityanisiweyo lubonelela ngeminyaka engama-25 ukuya kwengama-40 efumanekayo kuluhlu lwee-hues ezingenasidingo sokupeyintwa emva kofakelo olwenza izinto ezidityanisiweyo zibe yipremiyamu endaweni yamaplanga. Ixabiso libiza ngokufanelekileyo xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zocingo ngokubanzi.
Nanga amaxabiso ocingo olungumdibaniso kwiinyawo ezinemigca: Uluhlu lokubiyela iipikethi: $ 9- $ 22. Ukubiyelwa ngasese ngokudibeneyo: $ 20- $ 32. Ukubiyelwa kweprimiyamu edityanisiweyo: $ 28- $ 45 (Qaphela ukuba isixa sibalwe ngeenyawo ezili-164 zomgca wokubiya)
Olu cingo luphakamileyo lomthi lubonisa ibala elifudumeleyo lomthi elivelisa amaqhina amnyama endalo. Isiseko sekhonkrithi esinomjelo sivumela amanzi emvula kunye namanzi aphantsi komhlaba ukuba aphume ngokwendalo aye kumjelo wesiphango, othintela ukubola kweenkuni ocingweni.
Ipateni enqamlezileyo eyenziwe phezulu emaplangeni ebekwe nkqo ivumela ukukhanya ngakumbi kunye nomoya ngelixa igcina imeko yokhuseleko.
Lenziwe nge-redwood, olu hlobo locingo luphezulu kwaye lomelele, kodwa luqinisekisa ukuba umoya owaneleyo uyadlula ukuze upholise lo mgangatho ungaphandle. Ukubeka indawo phakathi kweeplanga sisisombululo esifanelekileyo kuhlahlo-lwabiwo mali, kwaye kule meko, izityalo ezinamanzi zazifakwe ocingweni.
Ukugqitywa komgangatho wenqwanqwa lamaplanga kwenziwa kwibala elikhanyayo kancinci kwaye libonisa ibhentshi encinci yamaplanga.
Olu cingo lwegadi luhambelana ngokugqibeleleyo nezinto ezimbini ezisisiseko-isitena kunye neenkuni. Iiplanga zeenkuni ezinzima zibekwe nkqo ngaphandle kokuhonjiswa, gcina ingqolowa yendalo kunye nombala weenkuni. Oku kuhamba kakuhle ngezitena ezibomvu ezisetyenzisiweyo ezisetyenziselwa iplanga kunye nomlilo owakhiwe ngezitena.
Iibhentshi ezisezantsi ezenziwe ngomthi ofanayo ziqhutywa kumacala omabini epatio, ikwaxhaswa ngumaleko wesiseko wezitena ezibomvu.
Ikwabizwa ngokuba lucingo olulungele ummelwane, ucingo lwe-shadowbox luqinisekisa ukujongwa ngokufanayo kumacala omabini ocingo, okuthetha ukuba omabini amacala esiza kufuneka avumelane ngenkangeleko kunye nolondolozo locingo.
Kule meko, iplanga elidala elinombala okhanyayo lalisetyenziswa phakathi kweposti eyomeleleyo kunye neentsimbi zesiphelo esinye. Olu hlobo locingo lukwabizwa ngokuba yibhodi ebhodini, njengoko uthotho lweebhodi lunokuxhonywa kwiileyili eziphezulu nezisezantsi, kuxhomekeke kubungakanani babucala obabizwayo.
Iingcingo zeenkuni zibonelela ngokhuseleko olukhulu kunye nemfihlo ngaphandle kweendleko eziphezulu zabasebenzi kunye nezinto ezisetyenzisiweyo. Olu hlobo locingo lunokunyusa ukomelela kwalo kunye nokuphila ixesha elide ngenxa yokuzinza kwalo.
Iindleko zokubiyela iinkuni ziyahluka ikakhulu ngenxa yezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo okanye uhlobo lomthi oza kusetyenziswa okanye ubungakanani kunye nesimbo. Apha ngezantsi kukho iindleko eziqhelekileyo zokubiyela iinkuni:
Inxalenye yabucala yocingo lwaBucala-isetyenziselwa ukwahlula ikhaya kunye neyadi engasemva kommelwane. Olunye usetyenziso lwayo lubandakanya ukongeza umaleko owongezelelekileyo wokukhusela abantu abazakufaka iphuli eyadini, ukwahlula iindawo ezahlukeneyo eyadini, kunye nokwenza umqobo phakathi kweyadi kunye negaraji.
Izinto ezixhomekeke kuhlobo lomthi, ubunzima, kunye nokuphakama ziya kubiza i- $ 4 ukuya kwi-75 yeedola ngeenyawo. Izinto ezisetyenziselwa ukubiyela ngemithi eqinileyo ye-6 'yomthi womsedare okanye wepayini ziya kubiza i-7 ukuya kwi-15 yeedola ngeenyawo, okanye i-800 ukuya kwi-1,800 yeedola kwi-100' yocingo, okanye i-2,200 ukuya kwi-4,800 yeedola kwi-300 'yokubiya.
Uhlobo lweRanch Wood Wood Fence - oku kuthathwa ngokuba ngumgaqo kaloliwe owahluliweyo okanye iposti kunye nomzila kaloliwe. Ukuba nemizila emibini ukuya kwemine iya kuxabisa i-3 ukuya kwi-9 yeedola ngenyawo ngalinye kumatshini kuphela. Kuza kubiza i-400 ukuya kwi-1,200 yeedola nge-100 'ukubiyela kwaye malunga ne- $ 2,500 ukuya kwi-8,000 yeedola ngokufaka i-eka elula yesikwere emalunga ne-830'.
Eli xabiso liyahluka nokuba kuyakubakho isango elisebenzisa ixabiso eliphantsi njengepine, elisadinga unyango ukuxhathisa izinambuzane nokubola, okanye umsedare onganyangekiyo zizinambuzane kunye ne redwood.
Ukufakwa kobungcali kocingo lukaloliwe kuya kuxabisa malunga ne- $ 8 ukuya kwi-25 yeedola ngeenyawo, okanye i-900 yeedola ukuya kwi-3,000 yeedola nge-100, okanye i-6,800 yeedola ukuya kuma-21,000 eedola ngokufaka isikwere seehektare.
Ucingo lwePiki yomthi-izixhobo zokwakha ucingo olude olungu-3 'ukuya ku-4' lubiza i-3 ukuya kwi-30 yeedola ngonyawo olunye. Ngokubhekisele kuhlobo lomthi, ukuphakama kocingo, kunye nobunzima be-deign, iindleko zinokuba malunga ne- $ 400 ukuya kwi-1,800 yeedola kwi-100 'yokubiyela kunye ne- $ 1,000 ukuya kwi- $ 5,000 ye-300' yokubiyela ukufakwa kwe-DIY.
Ukufakwa kobungcali kuya kuxabisa i-3 'ukuya kwi-4' yocingo olude malunga ne- $ 1,000 ukuya kwi-8,000 yeedola kwi-100 'yokubiyela kunye ne- $ 3,000 ukuya kwi-24,000 yeedola kwi-300.
Imfihlo-yobucala okanye ubumfihlo bocingo lomthi-iindleko zayo zisusela kwi- $ 8 ukuya kwi- $ 100 er ngeenyawo. Kuxhomekeke kubukhulu, oku kulandelayo lixabiso: $ 10 ukuya kwi-30 yeedola ngeenyawo ukubiyela i-6 'ubude, i-1,000 yeedola ukuya kwi-3,500 yeedola ye-100, kunye ne-3,000 ukuya kwi-10,000 yeedola.
NjengaseGeorgia's Production Fence Works, i-6 'wood fence yabucala enocingo oluphathwe ngocingo kwikhonkrithi ibiza i-11.30 yeenyawo ngenyawo ngalinye usebenzisa ipine ephathwayo kunye ne-14.99 yeedola ngeenyawo usebenzisa umsedare obomvu waseNtshona.
Ucingo oluyimfihlo lokugcina iinkuni oluphezulu kunye nolwezantsi kunye neepokethi ezimileyo ezinesithuba see-intshi ezimbini ezishiyekileyo inexabiso elimalunga ne- $ 18.80 ngeenyawo xa usebenzisa ipine kunye ne- $ 25.75 ngeenyawo xa usebenzisa umsedare obomvu waseNtshona.
Umahluko kwibhokisi yebhokisi yezithunzi, oku kubhekiswa kuko njengommandla olungileyo wocingo. Ngophahla nje ngalunye lweepaneli zomthi ezibekwe kwiileyili, kwaye zahlulwe ngokulinganayo kwiplanga elinye, olu cingo lubonelela ngokhuseleko kodwa luvumela umoya nokukhanya ukuba kudlule phakathi kocingo.
Olu lucingo olufanelekileyo ukuba nalo xa umntu enomdla wokunxulumana nabamelwane babo. Kule meko, i-pergola yeplanga, yokugqitywa kweenkuni ezifanayo kunye nokwenziwa kulwakhiwo olufanayo olusisiseko lwakhiwe ecaleni kwendlela yegadi egangathiweyo.
Olu cingo lwasemva kwendlu lubonisa ubume beplanga ethe tyaba phakathi kweeposti zocingo. Ukongeza, phezulu kwibhodi yentsimbi ecwangcisiweyo kufakelwe ubumfihlo nokhuseleko, ngaphandle kokuphazamisa ukukhanya kunye nomgangatho womoya wepatio yangasemva.
Umthi ococekileyo omnyama osikiweyo kwiiplanga ezicekethekileyo wawusetyenziselwa iplanga elingaphandle, apho kwabekwa khona iseti yeplastikhi ephothiweyo.
Olu cingo, lwenziwe kulwakhiwo olusisiseko kodwa olomeleleyo lusebenzisa umthi obomvu womsedare. Iinkozo zendalo zivunyelwe ukuba zikhanyise, zidale ukubonakala okunomdla kwiiplanga ezithe nkqo ezibekwe phakathi kwezithuba eziphambili kunye neentsimbi.
Kwicala locingo, ibhedi engamatye iyindlela entle yokukhusela ucingo kumhlaba obalekayo nakumanzi emvula, ngelixa izibane ezincinci zelanga zikhanyisa ucingo ebusuku ngendlela ethandekayo kodwa enomtsalane.
Isimo esiqhelekileyo kwiindawo ezincinci, ezikhuselekileyo zedolophu yipikethi. Nangona kunjalo, uluntu oluncinci, olunabantu abaninzi abanemicimbi encinci yezokhuseleko banokukhetha uthango lweepikethi ezisezantsi.
Ucingo olusezantsi alwenzi umsebenzi oncomekayo wokubonelela ngokhuseleko; Nangona kunjalo, kulungile xa umntu efuna ukubonisa i-façade yangaphambili yekhaya labo.
Kule meko, ucingo olucekeceke olungwevu luyaphela ngasemva, lukhupha iithoni zasemhlabeni zenqanawa zodonga ezixhonyiweyo, uphahla olumdaka kunye nokugqitywa kweenkuni zomnyango wangaphambili.
Ngomgangatho wendlu owenziwe ubukhulu becala kwiithayile zamatye ezimnyama kunye namdaka, iiposti zangaphambili zocingo zibonisa iposti yelitye elifanayo lokukhanya elixabisa beige kwizitena ezithe tyaba.
Phakathi kweentsika zamatye, isiporo esingaphezulu nesezantsi esenziwe ngomthi ojijekileyo sisetyenziswa njengesiseko samaplanga enziwe ngobume obume nkqo kunye nezithuba phakathi.
Isango lenziwe ngendlela efanayo, ngaphandle kokuba iinkuni ziqaqambile, umthunzi odlamkileyo ngakumbi, ukugxininisa ukuvulwa kwesango kunye nokubeka ithoni eshushu yendlu.
Olu cingo lomthi womsedare olulula lubonisa isithuba kunye nomgaqo kaloliwe oneeplanga ezithe nkqo ezibeke icala elinye kuphela. Nangona oku kuqulunqwa kungabizi kwaye kulula, ukuvala izikhewu phakathi kunye nokwenza isitokhwe esiphezulu kuvumela ukhuseleko olwaneleyo kunye nemfihlo.
Kule gadi, ucingo olulula luhamba kakuhle nepatio esemva kwendlu kwipateni yesamente enemibala, isetiwe nepatio ebekwe ngesambrela esikhulu.
Iingcingo zeposi kunye nezololiwe zihlala zifana nemvelaphi yazo yemveli eyahlula ucingo kaloliwe ngaphandle kokuhlala kukho iiposti zokuhombisa.
Uhlobo oluthile locingo lubonelela ngokuguquguquka kokufaka iiposti kunye neerayile ngokwahlukeneyo. Isetyenziswa ngakumbi kwiinjongo zokuhombisa ucingo lunokwakhiwa kwiintlobo ezahlukeneyo zemithi ezifana nemisedare kunye ne-spruce enobomi obude okanye ipayini ifutshane kakhulu.
Olu cingo lusebenzisa ulwakhiwo olusisiseko kodwa olomeleleyo lomthi womsedare weposti kunye nololiwe onamaplanga athe nkqo phakathi.
Sebenzisa ububanzi obukhulu beeplanga kuvumela ingqolowa yendalo kunye namaqhina omthi ukuba akhanye, ngelixa ubeka ukukhanya kweleti kumanqamlezo aphezulu kunye nomtsalane wecingo, kwaye ivumela ukukhanya ngakumbi kunye nomoya ukuba udlule kucingo olunzima.
Ungathenga iipaneli zocingo lwokhuni njengale kit yaseNtshona isedare yocingo lomsedare kwivenkile yehardware efana neKhaya ledepho okanye iLowe.
Ngokuqhelekileyo ziza kumacandelo ama-6 × 6 malunga ne- $ 105 yesiqwenga. Umsedare wendalo yinto entle yokubiya ngaphandle kuba i-eco-friendly, kwaye iyamelana ngokwemvelo kwiibugs kunye nokubola. Olu cingo lubonisiweyo lune-lattice ephezulu yokhuni kwaye lunokudityaniswa kunye nezikrufu okanye iinzipho.
Uyilo locingo oluthe tyaba lubonelela ngesitayile sangoku okanye sangoku. Ukufumana i-vibe yanamhlanje yetropiki, iinkuni ezimnyama ezinamabala amnyama, ezixhonywe ngokuvezwa kwamanzi zinokubekwa kwimigca ethe tyaba.
Olu hlobo locingo ludibanisa imigca ecocekileyo efunekayo yentsingiselo yanamhlanje kunye neenkozo ezinzima, ezinobunzima bamaplanga ashushu. Olu cingo luhambelana kakuhle nethoni efudumeleyo ye-beige yeethayile ezinkulu zangaphandle ezisetyenziselwa ipatio.
Inketho efanelekileyo yokubiyela eluphahleni, iisileyiti zomthi ezithe tyaba kwithoni efudumeleyo zinokubekwa ngezithuba phakathi kwazo ukubonelela ngasese. Oku kuvumela ukukhanya kunye nomoya ukuba kudlule ngaphandle kokubeka esichengeni ukhuseleko lwendawo yepatio.
Ipatio ngokwayo ine-pergola enelaphu elimhlophe elikhanyayo elenza isakhelo esimnandi esimile kakuhle esimile okwe-L se-patio kunye netafile yekofu ehambelana nendawo ehonjiswe ngezibane ezijingayo. Ukongezwa kwekhaphethi eluhlaza okotshani obumnyama nako kongeza kumtsalane weBohemian wale patio yophahla.
Umdlalo okrelekrele kwikhaya lesitayile lwangoku, olu cingo lubonisa imitya yomthi obomvu yahlukaniswe ngokulinganayo kwaye inyuselwa kwiitreyini ezimnyama zepeyinti. Iprofayili ehlengahlengisiweyo ihambelana nemilo yebhokisi yendlu kunye neendonga zayo ezimhlophe ezimhlophe ngelixa izisa ukugqitywa kwendalo ngakumbi ngeenkozo ezishushu zomthi.
Oku kucwangciswa okulula kodwa okunethezeka kokujonga ngasemva kusetyenziswa ukusetyenziswa kweenkuni ezixineneyo. Umgangatho uphakanyisiwe kusetyenziswa iiplanga ezingqindilili ezibekwe ngendlela emgceni, apho izitulo ezibekwa elangeni zibekwa embindini kunye nesambrela esilinganayo sepatio.
Ucingo lungqamana nokugqitywa komgangatho, nangona kukwimigca emincinci efakwe kwizithuba ezixineneyo kunye nakwimizila. Olu luhlu lulula luzisa ubungqongqo besango laseAsia elineentloko, kunye nomhombiso wephuli owenziwe ngeceramic, ilitye kunye nobhedu.
ulitshintsha njani igama lakho
Ukunika olu cingo uluvo lwe-Contemporary Asia, ukusetyenziswa kwebala elifudumeleyo lomthi kwakudityaniswe nesakhelo esenziwe ngomthi omdaka omnyama.
Isiseko sibonisa iipali zomthi ezinzima kunye nesiseko seplanga ezibekwe ngokuthe tyaba ezenziwe ngeplanga emnyama zaza zahluthwa ukufezekisa ukubonakala okukhoyo.
Phakathi kwezi zinto, umsebenzi we-lattice wemicu yeplanga ebhityileyo ubekwa phakathi kweeplanga ezimbini ezinzima ezithe tyaba zombini ezigcotshwe kwitoni efudumeleyo ebomvu.
Igadi yoZon ezolileyo inikwe umva olungileyo kunye nothango lwamaplanga olucociweyo emva kwayo. Ucingo luluhlu lweeplanga, olugqitywe ngomthi oshushu kwaye lubekwe ngokuthe tye, lubiyela igadi yeZen ngokupheleleyo.
Indawo eseleyo yegadi inamatye amancinci emhlabeni, okwahluke mpela kubuncwane obutyebileyo bemithi esemva kocingo.
Le ndlu yale mihla iqulethe iprofayili ye-boxier, eneefestile ezinkulu zemifanekiso kunye nokusetyenziswa okumhlophe kweendonga zayo eziphambili kunye nokungwevu okumnyama ngenxa ye-fascia yayo. Itoni yenkuni eshushu esetyenziselwa ucingo kunye nodonga lwendlela yokungena ephambili izisa ubushushu.
Ucingo lubonisa isakhelo esimnyama esenziwe ngesinyithi esenziwe ngocwecwe oluhlengahlengisiweyo oluhlengahlengisiweyo, olunemicu yeplanga ebhityileyo kwindawo enenkuni efudumeleyo edityaniswe ngokulinganayo kwaye isebenza phakathi kwesakhelo.
Udonga lwangaphandle lukwanemicu yemithi efanayo epakishwe ngokusondeleyo kunye njengomva ongasemva kwinombolo yendlu kunye nesibane sodonga esingaphezulu.
Le ndawo inomdla yangasemva kwendawo yangasemva ibonelelwa ngasese ngokusebenzisa ucingo lweenkuni ngeepaneli zeglasi ezibandayo. Uyilo locingo lufezekile kwabo banabamelwane abasondeleyo abafuna ukonwabela imfihlo kwaye bangenise ukukhanya kwendalo.
Le ndlu, ineprofayili ehlengahlengisiweyo kunye ne-boxy izisa ubushushu obugqithisileyo kunye nokusetyenziswa okunzima kweeplanga ezifudumeleyo zeplanga langaphambili kunye nokubiya.
Ucingo luqala ngesiseko esinzima seendonga ze-stucco ezipeyintiweyo, ezigqityiweyo kwimicu emincinci yomthi ohamba ngokuthe tyaba phakathi kweentsimbi.
Indawo eyaneleyo phakathi kwemicu ivumela ababukeli ukuba babone ngakumbi ifadesi ekwabonisa ukugqitywa komthi ofudumeleyo, nangona kungekho sithuba kwaye usebenzisa iiplanga ezibanzi ukuhamba nebhokisi egqityiweyo ye-balcony kunye nebhokisi yezityalo.
Nangona ukubiyelwa kwale ndlu kusebenzisa uhlobo olunye lomthi obomvu macala omabini, uyilo lwenza kucace injongo yecala ngalinye locingo. Inxalenye yangasemva inezithuba ezomeleleyo ezineeplanga ezibekwe nkqo zibekwe kwiileyili eziphezulu nezisezantsi kungekho zithuba phakathi.
Elinye icala nangona kunjalo, libonisa ukukhanya okucekeceke ngemicu yeenkuni ezincinci ezihamba ngokuthe tye nezithuba phakathi kwazo. Ucingo lwangasemva lubonakalisa isidingo sokuba bucala ngakumbi kunye nokhuseleko, ngelixa ucingo kwicala luvula indawo yepatio evulekileyo yomoya kunye nokukhanya okufunekayo.
Olu cingo lwesitayile seKhontrakthi lubonisa umthi obomvu ofudumeleyo obaleka ujikeleze le periyu yegadi, eyenziwe ngomthi onzima we-pergola. Idibene ngokusondeleyo kunye, ucingo luvumela umoya kunye nokukhanya ukuba kudlule ngaphandle kokuphazamisa ubumfihlo.
Iibhentshi ezikwipatio, zisebenzisa ibala elikhanyayo, nazo zilula kulwakhiwo lwazo kodwa zenziwe zangumbala ngokusetyenziswa kwemiqamelo yokuphosa ebomvu neblue.
Umgangatho ophakamileyo ongaphandle wenziwe ngomthi odityanisiweyo wombala ophakathi, uhamba kakuhle ngeethoni ezimhlophe ezithulisiweyo ezisetyenziselwa udonga lwendlu kunye neethoni ephilayo esetyenziselwa iingcango zayo, iifestile kunye nezinto ezifoliweyo.
Ibhalkhoni, ikwasebenza njengocingo olubheke ngaphandle, yenziwa ngendlela evulekileyo ngakumbi, njengoko ukuphakama sele kubonelela ngokhuseleko. Izikhundla eziphakamileyo ezinqeni zibekwe kwindawo elinganayo neentloko ezikroliweyo.
Phakathi, iiposti zemithi ezimileyo zimi zinendawo eyaneleyo phakathi, zivumela umoya omninzi ococekileyo kunye nembono entle yangaphandle ngaphakathi kumgangatho.
Umahluko ocacileyo kwindlu emhlophe engekho mhlophe enee-trim ezimdaka ngombala omnyama, i-redwood eyomeleleyo esetyenziselwa le ndawo yangaphandle kunye nocingo inika abasebenzisi isiphelo sendalo kodwa esimnandi sokusebenza. I-redwood isetyenziswa ngaphandle komthungo kumgangatho enezitulo ezigcakamela ilanga kunye netafile esezantsi.
Ucingo olungqongileyo lwenziwa kwakwiplanga elifanayo lomthi obomvu, kodwa lufakwe kwizithuba ezinezithuba phakathi kwazo ukuqinisekisa ukuhamba komoya olungileyo. Umgangatho wonke ukhanyisiwe zizibane zentsimbi ezibekwe eludongeni.
Le deck encinci iphakanyisiweyo inefreyimu emhlophe ecocekileyo esezantsi, kunye nezithuba eziyekiswa kwisinyithi esimnyama kunye neglasi yesitayile esidala sesibane sangaphandle.
Iinkuni eziqingqiweyo ezisetyenzisiweyo kumgangatho ophakamileyo ziimpawu ezintle ezinzulwini zobusuku zipeyintwe ngeenqanawa ezinemibala emhlophe. Imifuno emhlophe ehambelana nomthi omhlophe opeyintiweyo wocingo, kunye nocingo olude lokuchola oluya kwimida yesiza.
Ngasemva kwendlu emxinwa, ubeko lomgama ngakumbi kumgangatho wedolophu yindlela elungileyo yokubonelela ngendawo engaphezulu. Umgangatho wenziwe ngokukhanya kwendalo okugqityiweyo ngamaplanga anzima.
Ifanitshala yasemva kwemithi eyenziwe ngomthi ibekwe ecaleni komphandle wale ndawo, ngelixa ingca ilula phambi kwayo. Ucingo lubonisa iiplanga ezibekwe ngokuthe nkqo kunye nokukhuphela okuthe tyaba phezulu. Iinkuni ezisetyenziselwa ukubiyela zisebenzisa ibala elipinki kancinci.
Iveranda yesitayile esiseMazantsi yakudala ifezekisiwe kule nkangeleko, ngokuqala ngenqanawa ekhanyayo engwevu eneendonga ezimhlophe kunye neefreyimu zeefestile. Iveranda emxinwa ikhuselwe ngocingo olusezantsi olunama-balusters amancinci kwaye antsonkothileyo kunye nomgaqo kaloliwe ongenamthungo.
Iseti nganye ye-balustrade isetiwe phakathi kweekholamu ezimbini kunye neentsika kwaye zine-architrave ye-arched, eyakha umbono. Ukuxhoma isityalo sokudubula kwincopho ye-arch nganye yongeza kumtsalane osezantsi wale ndlu.
Esi sithuba sakhiwe ngephepha elinendawo yokubasa umlilo, enezitulo zangaphandle zentsimbi ezinezinto ezipholileyo.
Kujikeleze le patio, ucingo lubonisa isiseko kunye nezithuba eziphambili ezenziwe ngezitena ezibomvu ezenziwe ngokhuni. Phakathi koku, kubethelelwe kwiziporo ezithe tye luthotho lweepike ezibekwe kufutshane. Olu donga lugciniweyo lunika ipatio i-Classic, i-rustic vibe.
Olunye uhlobo locingo lokubanjwa kweenkuni olunezitshixo ezinqamlezileyo eziqhagamshelwe zizithuba ezithe tyaba. Uninzi locingo olugciniweyo lwakhiwa ngaphandle kwemithi emhlophe edla ngokwenziwa nge-spruce, pine okanye fir.
Ucingo lunokungcoliswa okanye kupeyintwe ukunceda ukuthintela ukugoba okanye ukuqhekeka. Xa ungaphathwa kakuhle umthi uya kuphulukana nombala wawo woqobo kwaye uphele uye kwigrey yesilivere. Olu hlobo yiprojekthi yocingo ye-DIY engabizi kakhulu kwabo bafuna ukumakisha umgca wepropathi okanye ukubonelela ngokhuseleko.
Xa umntu ecinga ngothango lweepikethi uhlala esenza imifanekiso yoyilo oluhle olumhlophe olujikeleze indlu entle, eneentyatyambo ezigcinwe kakuhle kunye namatyholo.
Ngelixa ukongeza ucingo lwepikethi ngokuqinisekileyo kunokwenza ikhaya lakho libe nomtsalane ngakumbi, kukho inani lezibonelelo ezinxulumene nokongeza enye eyadini yakho. Ngaphandle kwento yobuhle, ucingo lwepikethi lungasetyenziselwa ukugcina abantu behamba egadini yakho, ukumakisha umgca wepropathi, okanye njengocingo lwabucala.
Ezimbalwa zezinto ezintle zokubiyelwa kweepikethi kukuba zifuna ukulungiswa okuncinci ngaphandle kokuhlanjwa amaxesha ngamaxesha, zihlala ixesha elide, zihlala zimelana neemeko zemozulu kunye nokubola, kwaye zinendleko ezifanelekileyo ukuzifaka.
Iingcingo zeepikethi zingathengwa nakwiiphaneli ezenza ukuba kube lula ukuzifaka kunezinye iintlobo ezininzi zokubiya. Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela i- Uyilo locingo lweepokethi igalari yemifanekiso.
Olu cingo lucwecwe lokuphakama olumhlophe oluqhelekileyo luhamba kakuhle kunye neentyatyambo ezimibalabala ezikhulayo phantsi emhlabeni. Into engekhoyo kukhuseleko nakubucala, ngokuqinisekileyo yenzelwe ngokwembono kunye nobunkunkqele, kwaye lulongezo oluqhelekileyo kumakhaya akhuselekileyo, amadlelo aphezulu.
Olu cingo lukhethiweyo lubonisa iincopho ze-beveled, kunye nendawo yokungena yobhedu yokuthambisa oyile esangweni.
Le gadi yeentyatyambo yenziwe kakuhle ngocingo olumhlophe. Icandelo ngalinye elithe nkqo likhwele ezantsi naseziporweni zaphezulu zenziwe ngobuciko kumkhonto omdaka, ukuyinika isitayile selizwe. Izithuba ezinkulu phakathi kwepikethi zivumela amagqabi kunye neentyatyambo ukuba zingene kwelinye icala locingo.
Le ndlu ipholileyo inesitayile esicocekileyo kunye neenqanawa ze-beige ezikhethiweyo zebhodi kunye neveranda efudumeleyo yeenkuni yenziwe kakuhle ngocingo olumhlophe oluphambili ngaphambili.
Iipokethi, ezenziwe ngomkhonto omnandi kwiingcebiso zibekwe kwiitayile eziphezulu kunye nezantsi. Iziko locingo libonisa umnyango osezantsi wokungena ngomthi owenziwe ngomthi ofanayo omhlophe, kwaye umda yimithi emincinci ecaleni kwendlela ebekwe ngezitena.
Isitiya seentyatyambo esidlamkileyo kunye neentyatyambo eziqaqambileyo ngombala o-orenji nomthubi zinikwa indawo engathathi hlangothi ngasemva kunye nocingo olumhlophe olusezantsi.
Iipilili ezinkulu eziphezulu kunye nezantsi zihamba ubude begadi, ngelixa kufutshane, iipikethi zeethiphu ezifakiweyo zifakwa phakathi. Izithuba ezinkulu phakathi zivumela umbono ongcono wegadi ngapha nangapha.
Le ndlu inkulu yesitayile seVictoria kunye neendonga zayo ezipinki kunye ne-emerald eluhlaza eluhlaza ibiyelwe ngaphambili ngocingo olumhlophe.
Izithuba eziphambili zibonisa ubude, ukwakha okunzima kunye neentsimbi ezenziwe ngentsimbi, kunye neepikethi ezincinci, ezifutshane zifakwe kwiileyili phakathi kwezithuba eziphambili. Umnyango ophambili ubonakalisa iarbor, apho izidiliya kunye nezilwanyana ezinwabuzelayo zinokugaqa ukusuka emacaleni ukuya phezulu kolawulo.
Ukongeza ukhuseleko ngakumbi kunye nobumfihlo kwifreyimu emhlophe yamapikethi amhlophe, olu cingo luqala ngocingo olubini lweebhloko ezinkulu zezitena ezibomvu, zilandelwa luluhlu lweepikethi ezimhlophe ezenziwe kwipateni yokuphakama okufana nomtshangatshangiso. Emva kocingo, ukongeza ubumfihlo, amatyholo amade, atyebileyo atyaliwe.
Nokuba ufuna ubumfihlo obuncinci kwipatio yakho okanye kwindawo yokubhukuda zininzi iindlela ezahlukeneyo zokubiya onokukhetha kuzo. Ezinye zeentlobo ezaziwa kakhulu zocingo lwabucala zibandakanya i-lattice, uthango, okanye islat somthi. Ngemifanekiso engakumbi ndwendwela eyethu izimvo zocingo lwabucala igalari.
Ukubonelela ngemfihlo eyiyo, olu cingo aluphezulu kuphela, alunazithuba phakathi kwezithuba ezifakiweyo kunye neeplanga.
Ukufezekisa ubumelwane obufuna inqanaba eliphezulu lokhuseleko, oku kucwangciswa kocingo kukwenziwe ngePVC, okuthetha ukucoca okuncinci kwaye kulula nokugcina.
Ukuba nocingo oluphezulu lwabucala akuthethi ukuba ube nomjikelezo ongenangqondo kunye ne-boxy. Olu cingo, lwenziwe ngeplanga lomthi ococekileyo ngokwendalo kumaleko athe tyaba, lubonisa iindawo ezingenanto phakathi apho kungafakwa khona iibhokisi zezityalo.
Ngenye ibhokisi yezityalo ezantsi apha ngezantsi yenziwe ngezitena ezibomvu, kulula ukwenza udonga oluqinileyo luzive luphilile kwaye luphefumla ngaphandle kokulalanisa kubucala.
Amatye aphantsi kunye nentsimbi yegrille ayinakunika bucala kangako, kodwa umqolo omde weengcingo uyenza ngokuqinisekileyo. Ukongeza, i-greenery yeehedges iphuma kwiziqwenga ezingwevu zamatye kunye nentsimbi eluhlaza epeyintiweyo. Ukongeza, ukusebenzisa izityalo njengomqobo wabucala kusavumela umoya kunye nokukhanya ukuba kudlule kumasebe.
Ucingo olude olwenziwe ngamaplanga amhlophe aqatywe ngeplanga luye lufikelele kwincopho eyenziwe ngomthi omhlophe. Oku kuvumela ubumfihlo ngelixa kuvumela umoya kunye nokukhanya ukuba kungene. Ucingo olumhlophe olulula luhamba kakuhle negadi yesitayile egqithileyo, kunye namanyathelo amakhulu elitye lendlela yegadi.
Ukuya kwindlela ye-luxe yanamhlanje, ibhedi yosuku ngemibala engathathi hlangothi ibekwe ebhedini yeplanga emhlophe eqatywe ilitye elikhulu lesamente. Ukuseta konke kugutyungelwe yitrllis emnyama eqala ngapha nangapha kunye nesibane esixhonyiweyo embindini. Ucingo lwangasemva lude kwaye lubekwe ngokusondeleyo, oko kuthetha ukuba bucala kakhulu, kwaye kwenziwa kwinto efanayo yokugqiba iinkuni njengombhede kunye nokuhombisa.
Ucingo lwale patio lubonisa ufakelo olude lweplanga elimhlophe, ngokudibeneyo. Komoya kunye nokukhanya nangona kunjalo, ezi ziqwenga zibonakalisa ipateni ejikeleziweyo. Le ndlela elula yeklasikhi ijongeka ihamba kakuhle nepatio evaliweyo kunye neebhokisi zezityalo ecaleni, zizele zizityalo zokuhombisa ezisezantsi.
Xa usakha ucingo, qala ngezinto zokuqala: cwangcisa. Jonga kakuhle indawo oceba ukuyibiya. Yiphonononge, phawula izinto ezinje ngamatyholo, zobe ukuba unganakho ukuqaphela imilinganiselo. Kwaye xa ucwangcisa, qaphela indawo yeesango njengoko oku kuya kubaluleka xa usiya ngaphandle kwaye ubeka iiposti.
Emva kokufumanisa isicwangciso, ngokulandelayo kukubeka i-perimeter. Ngokwesiqhelo iziteki kunye nemigca yemasoni isetyenziselwa eli candelo. Imigca ye-mason yolulwe ngokuqinileyo phakathi kwezibonda - kubalulekile ukuba ziqiniseke ukuba ziyacukucezwa ukuqinisekisa ukuba ubeko locingo luchanekile. Le migca inqumleza kwiimbombo zeeperimeter.
Ukuba kufuneka i-engile engama-90 engile kwezi kona, indlela ekhawulezayo yokuqinisekisa yindlela ye-3-4-5: Linganisa kwaye uphawule i-3 yeenyawo ngomgca omnye ukuqala kwikona uze ulinganise kwaye uphawule iinyawo ezi-4 ecaleni kwelinye . Ukuba umgama phakathi kweendawo eziphawuliweyo zii-5 iinyawo, imigca isikwere. Ngaphandle koko, hlengisa imigca kunye nezibonda ngokufanelekileyo.
Okulandelayo kukongeza iiposti. Ezi zinto zibonelela ngesona sakhiwo siphambili socingo lwakho kwaye sihlala sineemithi ze-4 × 4, ezibekwe emhlabeni kunye nomhlaba ophazamisekileyo okanye ikhonkrithi.
Umgaqo olungileyo wesithupha uya kuba kukuqinisekisa ukuba isithathu sesithuba singaphantsi komhlaba wokubamba okuzinzileyo nokwakhekileyo kwesandi. Linganisa umgama wezithuba ezicwangcisiweyo ukusuka kwiikona zobeko usebenzisa imigca yemason.
Izithuba zihlala zi-6-8 iinyawo ukwahlukana, kodwa gcinani engqondweni indawo ekucwangcisiweyo yamasango njengoko imiphetho emibini yamasango kufuneka inezithuba zokubamba iijamb zayo neehenjisi. Kukulunga ukusebenzisa isango lokwenene oceba ukulifaka ukuqinisekisa ukuba izithuba ozifakileyo zikumgama ochanekileyo omnye komnye.
Phanda kwaye ufake iiposti zekona kuqala kwaye usebenzise umgca wemason phakathi kweeposti zekona ukuqinisekisa ukuba zonke ezinye izithuba eziphakathi zinobude obulinganayo. Qiniseka ukuba imingxunya inobunzulu njengoko isithuba siphezulu ngaphezulu komhlaba, okanye ngokusisiseko isithathu sobude bonke. Unokukhetha ukuyibeka phantsi emhlabeni owugrumbe okanye ungasebenzisa ikhonkrithi ukubamba ngokuqinileyo.
Qiniseka ukuba wenze uphando lwakho ngemeko zomhlaba wengingqi yakho njengokwahluka kwemigca yeqabaka kunye nohlobo lomhlaba oza kuwumba kunokuchaphazela indlela ekufuneka uzifake ngayo iiposti zakho.
Oololiwe okanye iintambo 2 × 4 amaplanga. Ezi zihamba ngokuthe tye ukusuka kwiposti ukuya kwiposti kwaye, ubukhulu becala, zingama-24 ngokwahlukeneyo. Sebenzisa izikhonkwane zokuqhotyoshela iileyili kwisithuba. Sika okanye ushiye iileyili kwiindawo apho uceba ukufaka khona amasango kwaye uqiniseke ukuba unciphisa nawuphi na umzila ongaphezulu
Iibhodi zokubiyela nkqo okanye iipikethi zezokugqibela zokongezwa kwaye zigubungele izikhewu phakathi kwezithuba. Usebenzisa umpu womoya wesikhonkwane uhlala ucetyiswa kodwa ukuba kufuneka unike isikhonkwane, zama ukusebenzisa i-ring shank okanye i-spiral spils.
Okulandelayo kukufaka amasango. Kukho ii-odolo ezenziwe kwangaphambili eziza nezixhobo zazo zekhompyutha kodwa ukwakha enye kunye nokuthenga iihenjisi kunye neeratshi kuyo kuthe tye phambili ukwenza njalo, ukuba ukhetha indlela ye-DIY.
Emva kwayo yonke le nto, konke okuseleyo kukugqiba ucingo nge-varnish oyikhethileyo okanye ibala kunye nokongeza izinto ezifana nezicwangcisi, iipavile, kunye nezinye izinto zomhlaba.
Ungasebenzisa enye ekhoyo isoftware yoyilo locingo iinkqubo zokuyila uyilo lwakho ngaphambi kokuba uthenge naziphi na izinto zokuqinisekisa ukuba ufumana eyona nkangeleko uyinqwenelayo. Iinkqubo ezininzi zisimahla ukuba zingasetyenziswa.
Emva kokuba ucingo lwakho lwakhiwe, ulondolozo lubalulekile ekuqinisekiseni ukuba luhlala ixesha elide. Kungekudala, i-grit kunye ne-grime ziqala ukuqokelela ocingweni kwaye ngamanye amaxesha ukucoca okuqhelekileyo akunakwanela. Ngelo xesha, unokufuna ukuqaphela ukuhlamba uxinzelelo.
Ukuhlamba uxinzelelo okanye ukuhlamba amandla kukusetyenziswa kwesitshizi esinoxinzelelo oluphezulu lokususa ipeyinti evulekileyo, ukungcola, uthuli kunye nokungcola kumphezulu. Ngamanye amaxesha, isusa umaleko omncinci kumphezulu ukuveza ubume obutsha phantse ngaphantsi. Kananjalo, oku kuyamangalisa ngocingo oludala lweplanga ukutyhila ingqolowa yendalo yomthi.
Ukwahlula umaleko omdala wangaphandle weengcingo zomthi kunceda ukwenza umphumo wokugqibela ubonakale ucocekile kwaye ulungile. Ukulungiselela le njongo, kusetyenziswa umbhobho ojikelezayo ophakamileyo kunye ne-3000 psi.
Xa usebenzisa i-washer yamandla, qiniseka ukuhamba kancinci, ipikethi enye ngexesha, kunye nkqo. Ukuhamba ngokuthe tye kuya kushiya uphawu ocingweni olunokuba nzima okanye kufutshane kungenakwenzeka ukuba ulususe emva koko. Ukuhamba nengqolowa yocingo ngumgaqo olungileyo wesithupha.
Emva koko kuza kudyobha. Ungasebenzisa naliphi na ibala olinqwenela kule nxalenye yenkqubo kodwa ugcine engqondweni ukuba umgaqo wokucothisa kunye nokuma nkqo uyasebenza nakwibala xa usebenzisa isitshizi ukuze ufake isicelo ukugqiba.
Olu cingo lulula lufanelekile nakweyiphi na indlu yangasemva, ngakumbi leyo ifuna ukuphakama nje okufutshane. Yenziwe nge-PVC, ukubiya kuza ngamacandelo kwaye kunokudityaniswa. Ezona zithuba ziphambili ziyatyeba, zineengcebiso ze-beveled, kwaye zidityanisiwe kunye neentsimbi ezimbini eziphezulu nezisezantsi, apho imitya emincinci ibekwe ngokulinganayo embindini.
Ikwenziwe nge-PVC kwaye kulula ukuyidibanisa, olu cingo lumhlophe lokukhetha lubonisa uyilo olunamandla ngakumbi. Iingcebiso ezijikeleziweyo zepikethi nganye zahlulwe ngokulinganayo kwiileyili, kwinqanaba elineendawo eziphakamileyo zokukhetha. Isango eliphakathi linomphezulu ojikeleziweyo kunye nendawo encinci yokungena ngebronze.
Ucingo lweVinyl lolunye uhlobo olomelele ngakumbi kunokubiyelwa ngamaplanga, nangona lixabiso nje kancinci. Ukuphila kwabo ixesha elide akunakuphikiswa, kufuna ulondolozo oluncinci, kwaye abanakuchukunyiswa kukubola okanye iintubi.
Ukufakwa kufana neengcingo zokhuni. Cwangcisa kwaye ubeke isiphelo sakho kunye nezithuba zekona kuqala. Izithuba phakathi zinokwahlulwa ngokulinganayo phakathi kokuphela kunye neembombo emva koko. Qiniseka ukuba useta ezi zinto kwikhonkrithi ukuze ube nozinzo olukhulu ekubanjweni. Kwakhona qinisekisa ukuba ukuphakama kwesithuba esingaphezulu komhlaba kujikeleze i-54 ″ kwaye uqiniseke ukuba kwinqanaba.
Okulandelayo kuza iileyili. Izahlulo zocingo lweVinyl ziza kuqala zenziwe kwaye ke uya kuqiniseka malunga nobukhulu kunye nokuhambelana kwezithuba kunye nomgaqo.
Ngokwesiqhelo, emva kokuba zonke iileyili zifakiwe zaze zahlengahlengiswa, iiposti zeposi ziyabekwa kwizithuba kwaye zikhuselwe ngezikrufu.
Igadi entle yindawo efanelekileyo yokonwabela indawo zangaphandle zekhaya lakho. Kukho izinto ezahlukeneyo zokucoca igadi ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho. Iindidi ezidumileyo zibandakanya ivinyl, ukhuni, umnatha, isinyithi kunye neepaneli zocingo zepvc. Jonga igalari yethu ye Izimvo zocingo lwegadi Apha.
Iipokethi ezimhlophe ezimhlophe kolu donga lwegadi zivumela amahlahla amade ukuba andise amasebe awo ngaphaya kocingo. Iiposti eziphambili zezomthi oqinileyo omhlophe opeyintiweyo, onomphezulu oqingqiweyo onobunkunkqele. Umqolo ophantsi wokutshintsha kweentyatyambo ezityheli kunye neentyatyambo ze-lavender zihamba kwicala elingaphandle locingo, ukongeza umbala ngaphandle kokugubungela amahlahla e-rose ngasemva kocingo.
Le fowusti igalelwe igadi yocingo yindlela engabizi kakhulu yokukhusela umda okanye indawo yegadi. Ukutyabeka umgubo yimozulu kunye nomhlwa onganyangekiyo okwenza ukuba kulungele ukusetyenziswa ngaphandle. Amacandelo anokongezwa kwicingo ukwenza ubungakanani obunqwenela eyadini yakho.
Unokufumana ngaphezulu ulwazi malunga nolu cingo lwentsimbi Apha.
Ucingo lokubiyela olumhlophe luhamba ngaphambili kwale ndlu kunye nengca, kunye nepikethi nganye eqingqiweyo ukuze ibe nencam engqukuva. Zonke izithuba eziphambili zikwanomthi oqinileyo, kunye neengcebiso ezijikeleziweyo. Ingeniso ephambili inesango le-arched, kunye nophahla lweentyatyambo ezibomvu ezibonakalayo ngaphezulu kwe trellis emhlophe yepeyinti. I-trellis ikwaqhubekeka iye emacaleni, ngokuhombisa izidiliya ezinambuzelayo.
Ebunjiweyo njengocingo olumhlophe oluqhelekileyo kwizindlu ezininzi ezisezidolophini, ibala elimnyama lomthi elisetyenziselwa olu cingo lweepiki linceda ukuba kufezekiswe ukubonakala kwendalo, okuqinisekileyo. Umbala omdaka ofudumeleyo ubonelela ngasemva olungileyo kwimibala eyahlukeneyo kwiibhedi zeentyatyambo.
Izikhewu phakathi kocingo zikwanazo nezithuba ezide kunye nemidiliya enamagqabi. Iibhokisi zokutyala ucingo unokuyiphucula igadi yakho kwaye unike ugxininiso ngakumbi kwiintyatyambo zakho ngokwenza igadi enefuthe.
Indlela elula yokuhombisa ucingo olucocekileyo kukongeza umbala kwisiseko esimhlophe esicocekileyo socingo. Kule meko, umqolo weentsimbi ezincinci zapeyintwa ngemibala eyahlukileyo ye-pastel kwaye yaxhonywa kuloliwe ongaphezulu phakathi kwepikethi. Iintyatyambo ezinemibala eqaqambileyo zatyalwa kwisitya ngasinye.
Inkuni efunyenweyo yinto elungileyo ukuba uyisebenzise kocingo olungaphandle, ngakumbi xa usiya kwi-rustic, barn okanye ukubonakala kwemizi-mveliso. Kule meko, iiphaneli ezimbini ezomeleleyo zomthi zifakwe kwizithuba eziphambili ezomeleleyo. Phakathi kwezikhewu, ingca yasendle kunye neentyatyambo zikhula zasendle kwaye zikhululeke, zongeza kolu cingo lwe-rustic charm.
Yenziwe nge-resin emhlophe, olu cingo lwegadi lusezantsi lubonisa izithuba ezininzi eziphambili ezineengcebiso ezibekwe ngokwahlukeneyo. Phakathi kwezithuba, icandelo elisezantsi locingo libonisa iiplanga ezimfutshane ezithe nkqo, ngelixa icandelo eliphezulu libonisa imitya emincinci kulungelelwaniso lwe-lattice.
Ngaphandle kweepateni zokuhombisa ngakumbi, izikhewu eziphakathi azithinteli umbono weehydrangeas ezinobomi ngasemva.
Iipokethi ezijikeleziweyo zilayini olu cingo, lwenziwe kwindalo yendalo enobunzima obukhulu. Indawo yegadi esembindini, enepavumente erhabaxa yekhonkrithi, ikhokelwa yimango ebekiweyo eneeringi zeringi. Amacala ale arbor ayenziwe ngomsebenzi we-lattice kwimicu yomthi omncinci. Le arbor ingasetyenziselwa ukwenza uyilo lwezidiliya kunye nezityalo zomoya.
Ukujonga ngakumbi kwimizi-mveliso, isiseko solu cingo lwe-perimeter sibonisa umphezulu ongagqitywanga wekhonkrithi, owenziwe ngokusebenzisa iplanga elenziwe ngokhuni, kunye nokususa ngokukhawuleza isamente xa isamente isomile.
Umphezulu wocingo unamaplanga anzima akhweliswe eludongeni kusetyenziswa imitya yesinyithi. Ukuba yimfihlo eyongezelelweyo, kufakelwe imethi eyenziwe ngoqalo kwicandelo elingaphandle lokwenza ukhuni.
Kwi-tropical vibe yanamhlanje, iindonga ezijikeleze le patio zibonisa udonga lwesamente olomeleleyo, oluthanjisiweyo ngumqolo wemicu yoqalo. Udonga lwangasemva, nobude balo bonke bugqunywe yimigca eqatywe mnyama yoqalo ehambelana kakuhle nepeyinti eblue engwevu esetyenziselwa udonga olusecaleni kunye nebhokisi yezityalo.
Ukugqitywa kweenkuni zokutyela iipatio kwakenzelwe ukufanisa umbala omnyama osetyenziselwa ucingo lwe-bamboo, kunye nebhokisi yezityalo engezantsi.
Uqalo sisixhobo esizinzileyo esithetha ngethoni yolwimi olufudumeleyo nolunobunewunewu. Ucingo oluqhelekileyo lwe-bamboo lunokubiza ukusuka kwi- $ 1000- $ 1700 ngelixa ucingo oluphezulu lwe-bamboo lunokubiza ukusuka kwi-2300- $ 3700 ye-164 yeenyawo zomda wokubiya.
Olu cingo lomthi woqalo lubonisa uloliwe ongasentla nangaphantsi, apho iipali zoqalo zijikelezwe kwizikhewu ezibekwe ngokulinganayo.
Yenziwe kwindlela egudileyo egadiweyo, ucingo lubekwe kwibhokisi yesamente yesamente apho kwakutyalwe khona amatyholo. Izikhewu phakathi kwe-bamboo zivumela amahlahla e-rose ukuba akhule ngokwendalo kunye neendawo ngaphakathi nangaphandle kocingo.
Eli khaya limthubi likhazimli linqamlezwe yintsimbi ebiyelweyo epeyintiweyo enombala onzulu we-emerald eluhlaza. Kufakwe phakathi kweentsika ezomeleleyo, ezimfutshane ezigqityiweyo kwilitye le-beige splitface, iigrilles zikwimeko ethe nkqo kunye ne-diamond motif, ephelisa amanqaku abukhali omkhonto.
Eli khaya likhulu elinobunewunewu kunye neendonga zalo ezimhlophe kunye nophahla olunzulu lwethayile oluhlaza okwesibhakabhaka luyilwe kakuhle ziintsimbi eziluhlaza ezimnyama zepeyinti. Ukwahlulahlulwa ziikholamu ezimhlophe zesimbo esiqhelekileyo, iziqwenga ezithe nkqo ziphela ngencam yomkhonto, ukuqinisekisa ukhuseleko olwaneleyo kweli khaya ngelixa ligcina ukubukeka okutofotofo.
Ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nemfihlo, eli sango kunye nocingo lugubungela wonke umgangatho wendlu wokuqala. Iishiti zentsimbi, zipeyintwe ngombala omdaka ngombala omdaka, zahluke kakuhle kwizitena ezibomvu eziphelelwe lucingo. Iimakhishithi zenziwe ngamazinki, zinika isango kunye nocingo ubunzulu kwaye zixhonywe kwisakhelo sesinyithi esipeyintwe kumthunzi ofanayo.
Inemibala eyahlukeneyo yamatye omlambo ebusweni bayo, kunye ne-terracotta emdaka kwiithayile zayo zophahla, le ndlu inkulu iya kuthango olucekeceke ngakumbi nolulula. Ngesiseko sesitena esibomvu esidlakadlaka, ukuphakama kwentsimbi kwafakwa kolu cingo lwendlu.
Yenziwe ngombala omnye omdaka njengophahla, izinto ezilula kunye neencam zomkhonto zinika le ndlu ukhuseleko oluninzi ngaphandle kokuphazamisa umbono wengca yabo evela ngaphandle.
I-Classic ukuya kwiindawo ezininzi zokuhlala, isinyithi esikhulu esenziwe Uyilo lwesango lokuqhuba Apha ujikelezwe yimithi emininzi ephantsi kunye namatyholo okuhombisa. Ucingo olwenziwe ngesinyithi kunye nesango, epeyintiweyo emnyama, ayiphazamisi kubuhle beClassic yendlela ehlelwe kakuhle.
Ucingo lubiyele isiseko seethayile, kwaye lubonisa iprofayili ebotshelelwe phezulu. Iingcebiso ze-Spear-point ziyacinywa ziipatheni zentliziyo egobileyo kumzimba wocingo.
Ngaphandle kweediliya ezipholileyo, le ndlu ineendonga ezifudumeleyo ezingwevu, izinto ezimhlophe ezimhlophe kunye neenkuni ezinemibala efudumeleyo yomnyango wayo kunye nesibhengezo. Ucingo lwangaphambili lukhupha isitayile esifanayo sokuvuna, kusetyenziswa isitena esibomvu kunye neentsimbi ezenziwe ngombala omnyama.
Isitena esibomvu sasetyenziselwa ezona ntsika ziphambili, kunye nesiseko sothango lokukhusela. Isiseko sibanzi kangangokuba umda omncinci owenziweyo unokusetyenziselwa ukuhlala, okanye indawo yezityalo ezinamanzi. Ngaphezulu kwesiseko sezitena esibomvu, i-iron emnyama ibekiwe kwimiqolo emigca, kunye nocingo oluphindwe kabini nolusezantsi lomkhonto.
Le ndlela inamagingxigingxi inokuba yelitye nje eliqingqiweyo, kodwa iihektare zengca nemithi zibonisa imeko entle ngakumbi. Ucingo olulula lwefama yomthi omhlophe opeyintiweyo macala omabini endlela lufikelela kwisango elibanzi, elenziwa ngendlela entsonkothileyo.
Izithuba ezibini ezikhulu ezipeyintwe ezimhlophe kwaye zinezibane zesitayile esiqhelekileyo zineesango ezikhulu ezenziwe ngentsimbi. Amasango afaka iprofayili ephezulu egobile kwaye aneempawu zamagqabi kwibalter nganye eyodwa.
Ngophahla lwayo olukhulu oluthambekileyo, le ndlu yesimbo yakudala ikwabonisa ucingo oluphakamileyo kunye nesango ngaphambili. Izithuba ezibini ezomeleleyo zamatye aqhekekileyo omlambo asebenza njengezikhombisi zesango eliphambili lendlu yokungena, inani elincinci lenziwe kwimivalo yentsimbi ethe nkqo ethe nkqo.
Indlela yokuqhuba; Nangona kunjalo, ukujikeleza phantse i-15 leemitha, kufaka isango elibanzi lesinyithi elibanzi kangangokuba lifuna ukudibanisa ukunqamleza umnqamlezo kububanzi balo bangaphakathi ukuya kumphezulu wesithuba esingaphandle esibekwe kwimigca yelitye. Isango elibanzi lihlotshisiwe ngenkangeleko ephezulu ye-curvilinear kunye neempawu eziphambili zekhampasi enjengekhampasi.
Izindlu ezininzi zinokufuna ukugcina iindonga ukugcina umgangatho wamakhaya uhleli. Kule meko, udonga lokugcina lwenziwe ukuba lusebenze ngokudibeneyo nocingo lweperimeter.
Udonga lwalugqityiwe nge-beige splitface ilitye lomlambo, apho amatyholo kunye nemidiliya yayivunyelwe ukuchithela ebusweni bayo. Ngaphezulu koku, uthotho lweepike ezixhonyiweyo zixhonywe kwiileyili ezixineneyo, ezibonelela ngokhuseleko ngaphandle kokuphazamisa umoya kunye nomgangatho wokukhanya.
Umphambili obanzi wale ndawo iqukethe igaraji ephindwe kabini yendlela ebanzi ngakumbi enesango lesinyithi elikhuselweyo. Ipeyintiwe emnyama, isango libanzi kodwa lilula ukwakhiwa kweposi kunye noololiwe ngejika elinengqiqo kwiprofayili yayo ephezulu.
Umgaqo ofanayo wesitimela oqhubekayo kwi-fern yangaphambili yocingo kwaye uhlukaniswe kwindlela ehamba phambili ngeposi enkulu eyenziwe ngezitena ezibomvu.
Iintyatyambo ezipinki nezimfusa zivunyelwe ukuba zikhule zasendle kwaye zikhululeke, zenziwe ngocingo lwentsimbi olunombala omhlophe.
Ukunika igadi ukubukeka oku-rustic kodwa okutyebileyo kwe-Classic, amagqabi kunye neentyatyambo ezibiyelweyo kocingo olusezantsi ziyindlela entle yokukhusela igadi ngelixa ukhuthaza ubuhle bendalo obuziswe ngamatyholo aphuma kancinci.
Nangona olu hlobo locingo lukhangeleka luyinyumba ngakumbi, ukusebenzisa i-aluminium ukubiyela kunye neerayile kuqinisekisa ukuba ucingo lunokuhlala lungamhlwa. Ukongeza, i-aluminium ikhaphukhaphu kunentsimbi okanye intsimbi, ukuze isiseko kunye nokubiyelwa kwekhonkrithi kocingo akufuneki kube nzima kakhulu.
Kule meko, umgubo omnyama wawutyabeka ucingo lwealuminiyam, olwenziwe ngendlela ethe nkqo ye-austere ihamba kakuhle ngemigca ethe tyaba kubuso obomeleleyo obumhlophe obomeleleyo.
Ucingo olucocekileyo olumhlophe lujikeleze eli chibi lincinci lasemva kwendlu ngeenyibiba, amatyholo aphantsi kunye neengcongolo ezigqithileyo ecaleni kwendlela yegadi yesamente ebomvu kunye nepatio.
Ephantsi kunye nezikhewu phakathi kwe-baluster nganye, ucingo aluphazamisi kwindalo esingqongileyo kwaye lilula ngokwaneleyo ukuba licoceke kwaye ligcinwe. Sebenzisa i-aluminium kunye ne-powdercoating emhlophe kukwavumela umhlwa kunye nokukhusela okungcono.
Ibala lokudlala elumelwaneni likhuselwe kakuhle ngocingo oluphezulu kwiingcingo ze-aluminium ezinqamlezileyo. Iingcingo ezingcakacileyo ngokwendalo zivumela umoya kunye nokukhanya ukuba kungene ngaphandle kwengxaki, kwaye ikwenze ibala lokudlala livakale livulekile kwaye lamkelekile.
Abantwana baya kukonwabela ukudlala ngokukhuselekileyo kule ndawo yokudlala, ngelixa abazali nabagcini banokugcina iso elisondeleyo ngaphandle kocingo.
Eli khaya lesitayile lale mihla lingathathi hlangothi likwabonisa isitayile sangaphambili sangoku. Ukukhokelela ngaphandle ukusuka kwingca yengca eneengcongolo ezigqithileyo, ucingo lwesitayile esimgama luhamba lunqamleze ipropathi kwaye lufikelela kwisango lokungena elincinci lendlela yezitena zamatye.
Izithuba zekhonkrithi ezincinci zimi phakathi kwecandelo ngalinye lokubiyelwa ngealuminium.
Yenziwe ngealuminium, imibala yothango eluhlaza emerald eluhlaza ivumela ukuba idibane namahlamvu ayijikelezileyo. Olu cingo, kunye neprofayili yalo ebanzi ethe tyaba inezityalo eziphantsi, eziqaqambileyo ngaphambili kwayo ecaleni kwengca, ngelixa elinye icala libonisa indawo ephezulu enamagqabi amnyama.
Ucingo lwentsimbi olungenasici luqinisekisa ulondolozo olusezantsi kakhulu, njengoko irusi, ukukrwela kunye nobungqina bebala. Kule meko, indawo enkulu yangaphandle yeplanga enamabala amnyama ibiyelwe ngocingo oluphezulu lwentsimbi olunamacala amakhulu ngaphezulu kwezithuba eziphambili.
Ucingo lubambelele ebhedini yelitye enezityalo ezincinci zokuhombisa kunye neembiza zokucima ukuziva unzima, ngekamva lentsimbi engenasici.
I-Classic idibana neContemporary kule mint green house yeplanga efudumeleyo iplanga kuvulandi. Umjikelezo ujikelezwe ngocingo lwentsimbi olungenasici, kunye nomqolo wokubamba ngesandla kwicandelo lesinyithi elijikeleziweyo lokubamba.
Phakathi kwezithuba zemibhobho, iintambo zentsimbi ezibhityileyo zihamba phakathi, ziqinisekisa inqanaba eliphezulu lokhuseleko ngaphandle kokuyekisa umbono kwidesika.
Indawo entle yomlilo emva kwendlu inomgangatho weesetyhula enendawo yokuhlala enesetyhula enendawo yokuphosa. Isetyhula egumbini lekhonkrithi yegadi ekhokelela kule ndawo, ibanjwe ngodonga lokugcina amatye ajikelezayo omlambo.
Ukugcina inkangeleko yendalo yegadi, ii-cacti kunye nezityalo zokuhombisa zigudle ikona yangasemva yale gadi, ibiyelwe ngeepaneli zetsimbi ezibekwe ngokuthe nkqo esiphelweni. Umgangatho wesinyithi ongagqitywanga wocingo uhamba kakuhle namatye omlambo we-rustic kunye nomgodi womlilo.
Indlu yeklasikhi yangoku inezinto ezingwevu ezingathathi hlangothi kunye nabamhlophe abanombala oluhlaza okwesibhakabhaka emnyango wangaphambili. Njengokwahlukileyo kwiphalethi yendlu engathathi hlangothi, ucingo lwangaphambili lwenziwa kwizitena ezibomvu ezinobunzima besiseko kunye nezithuba eziphambili.
Phakathi kwezitena, ipeyinti emhlophe ipeyintiweyo ibekwe kwimiqolo elula ethe nkqo phakathi kukaloliwe ophezulu nangaphantsi. Umthunzi omhlophe osetyenzisiweyo ocingweni uhambelana nomhlophe osetyenziswe kwizinxibo zendlu, ucango kunye neefestile zezindlu, i-fascia kunye neeposti. Ukusetyenziswa okulula okumhlophe yindlela elungileyo yokulinganisa iinqanawa ezomileyo ezikhanyayo ezindongeni kunye neebhulukhwe ezimdaka ngombala ezisetyenziswe eluphahleni.
Indibaniselwano yendalo kunye nezinto ezenziwe ngabantu, olu thango lomelele kakhulu kwaye luyomelela, kwaye lubonelela ngenqanaba eliphezulu labucala. Isiseko, udonga olugciniweyo lwelitye elomeleleyo lomlambo, lwenziwa ngamanyathelo, ukulungelelanisa kwinqanaba lomhlaba othambekileyo.
Ngaphezulu koku, kubekwe isitena esibomvu kwimiqolo ecocekileyo, kunye nezona ndawo ziphambili ziphume eludongeni kwaye ziphelise kwincam yesamente.
Eli khaya lesitayile selizwe lakudala linophahla olude kwi-stucco emdaka kunye nelitye le-grey slate. Ucingo lwangaphambili lubonisa isiseko selitye elicekethekileyo elingwevu, kodwa lithanjisiwe ngocingo olusezantsi lwealuminium olusetyenziswa ngaphezulu kwalo.
Ngezikhewu ezibanzi phakathi, ipateni yocingo lwangaphambili iyasetyenziswa kumasango amabini angaphambili, ekhokelela kumnyango omkhulu wendlu kunye nomnyango ongasemva.
Ukujonga phantse ngathi ngumthi wendalo opeyintwe mhlophe, olu cingo lwenziwe nge-PVC. Ngesiseko sekhonkrithi epeyintiweyo, iiphaneli zePVC zixhonywe kuloliwe ongasentla nangaphantsi onezikhewu phakathi. Ezi ntsimbi zaye zaxhonywa kwiintsika ezinkulu, ezomeleleyo ezenziwe ngekhonkrithi emhlophe emhlophe.
Ukubiyelwa kwepaneli ye-PVC nako kunokuza kwiipateni ezinomdla ngakumbi. Olu cingo luqala ngesiseko esingagqitywanga sekhonkrithi, kwaye kwenziwa ukubiyela okunzima okumhlophe ngaphezulu koku, izithuba eziphambili ziyekiswa kwisigcina-ntloko esimilise.
Phakathi koku kuyilwa, iiplanga ezibanzi ezingwevu efudumeleyo zibekiwe kungekho zikhewu phakathi, kuqinisekisa ubumfihlo. Inxalenye ephezulu yesakhelo, nangona kunjalo, senziwa ngwevu ekhanyayo kwilayini edibeneyo yokuwela, ukuzisa ukukhanya ngakumbi kunye nomoya.
Ungalitshintsha njani igama lakho kwimo yase Washington
Ucingo lwe-lattice luhlala lwakhiwe ngomthi, i-vinyl okanye isinyithi kwaye inee-slats ezenza i-criss-cross design design. Iingcingo zeLattice zihlala zisetyenziselwa ukubonelela ngasese kunye nomthunzi wepatio yangasemva kunye neepaki. Benza ukongeza okuhle kwigadi apho iiphaneli zeleti zinokubekwa khona ukuze zenze imeko ethandekayo. Bona eyethu ucingo olubiyele uyilo lwegalari apha.
Eli khaya liphefumlelweyo laseAsia libonisa ucingo lwesitayile se-lattice kwicala elinye lomgangatho ofudumeleyo womthi. I-lattice ihonjiswe ngezityalo ezirhubuluzayo kunye nomtya weebhalbhu zokukhanya. Iinkuni ezifudumeleyo zomgangatho kunye neelitisi zithelekisa kakuhle nokuluka okumnyama okungwevu okusetyenziselwa ifenitshala yangaphandle, eqaqanjiswe yimiqamelo ebomvu. Imithi efudumeleyo nayo ihamba kakuhle notyani oluhlaza olumnyama kwelinye icala lomgangatho.
Le patio elula inezinto zokubopha zesamente ezingagqitywanga kwipateni yeherringbone. Ngaphandle kwalokhu, izityalo eziphantsi kweentyatyambo zibulisa ipatio, eyenziwe ngocingo lwesimbo se-lattice eneendawo ezinkulu phakathi, ezaneleyo ukuba izityalo zingene phakathi, kodwa zikhuselekile ngokwaneleyo ukuthintela abangeneleli. Umgangatho omncinci ukhokelela kumanyathelo athile afikelela kumnyango omncinci weshedu owenziwe ngomthi ofanayo, nangona kunjalo kwiiplanga ezinkulu.
Olu cingo lwesimbo se-lattice lubonisa ngomthi opeyintwe mhlophe, kwaye ibekwe ngemingxunya emikhulu, ivumela izidiliya kunye namatyholo asezantsi ukuba abambelele kwaye akhule. I-lattice iphelela phezulu nge-trellis, apho izityalo ezininzi kunye neentyatyambo zivunyelwe ukuba zisasaze. Isango kolu cingo lubonisa ijika elijonge ezantsi kwiprofayili, libonisa indlela engenayo yokungena ngaphezulu kwayo. Ngobuso obuthe nkqo ebusweni bayo, isango elincinci likwanomboniso womnqamlezo ekubiyweni kwawo.
Indlwana encinci ye-rustic yenziwe kakuhle ngocingo oluqinileyo lwendalo kunye nesango le-arbor.
Izitena ezibomvu zikhokelela kumnyango oluhlaza wasemanzini, owenziwe ngumthi wamaplanga anzima ngaphezulu kwesango leplanga elifutshane. Ngapha nangapha, iiplanga ezibekwe nkqo zisebenza njengesiseko socingo, ngelixa indawo ephezulu inepateni ye-rectilinear lattice, evumela izityalo zasegadini ukuba zikhule zikhululeke.
Amatyholwana amade aluhlaza asebenza njengemva kwesi sihlahla senziwe ngomthi kunye nocingo loqalo. Phantsi kwaye yenziwe ngomnqamlezo oqanduselwe imitya yoqalo, ukuguga kocingo kunye nezinto zayo kusebenza kuphela ekunikezeleni ucingo uphawu oluthe kratya, kukhupha okuluhlaza kwemithana kubengcono kunocingo olutsha kraca.
Iintyatyambo zeentyatyambo zithsaba ngentla kwesi sango sine-arbor esikwinqanaba eliphezulu esenziwe ngamaplanga anzima aqatywe mhlophe. Ngaphantsi kwe-arbor, isango eliphantsi lenziwa ngeprofayili ejonge ezantsi kunye ne-brace cross. Ngapha nangapha, izityalo ezininzi ezineentyatyambo ziyavunyelwa ukuba zisasaze ngohlobo oluvulekileyo lwesitayile socingo.
Eli lizwe lekhaya libonisa ukusetyenziswa kwe-gabion esetyenzisiweyo ngamaplanga eenkuni abiyelweyo ngocingo lwawo. IGabion yinkqubo apho iibhokisi ezenziwe ngocingo okanye umnatha wocingo zizaliswe ngamatye akhoyo ekuhlaleni. Ezi bhokisi ke zigcinwa, enye phezu kwenye.
Le yeyona ndlela inexabiso eliphantsi yokufezekisa isitayile sekhaya esine-rustic, ngakumbi xa silingana neenkuni ezixovileyo ezifumaneka kwindawo ekufutshane.
Ucingo lwe-gabion luhlala luqala ngokuthenga ikhithi enocingo. Umnatha waseGabion uhlala ugqityiwe ngeGalfan engumxube we-95% zinc kunye ne-5% yealuminium.
Nje ukuba ucoce kwaye ulawule umhlaba apho uza kufakela ucingo ungaqala ukudibanisa ubume. Izibopho zokuqinisela zibambe isakhelo socingo kunye. Ngelixa ugcwalisa ngamatye uya kufuna ukukhetha kuphela amatye amakhulu ngokwaneleyo ukuthintela ukutyibilika kwimesh.
Ucingo oludibanisa ikhonkco lukwabizwa ngokuba yi-wire netting, i-wire-mesh, ucingo lwenkanyamba, ucingo lwenkanyamba, okanye ucingo lwe-diamond-mesh. Luhlobo locingo olukiweyo kwaye lwenziwe ngocingo oluhlanganisiweyo okanye lwentsimbi.
Iingcingo zigobele kwipateni ye-zig-zag ukuze amagwegwe agobeleke ngocingo kwangoko kwelinye icala kwaye amagwegwe ajikayo ajongene nocingo ngoko nangoko kwelinye icala. Oku kwenza ipateni yedayimani ebonakala kuninzi lweengcingo zonxibelelwano. Ngokufikeleleka kwayo kunye nokuthandwa ngokubanzi, ezi ntlobo zocingo zezinye zezona zinto zixhaphakileyo elizweni.
Ngaphandle kokusetyenziswa okuqhelekileyo emaphandleni, ehlathini nakwimimandla yezolimo, ucingo lwekhonkco lwamakhonkco luqhelekile kwiindawo ezininzi zokuhlala kunye needolophu.
Oku kungenxa yokuba iindleko zazo zisebenza ngokukuko, kodwa nangenxa yendibano yazo yolondolozo olusezantsi, iindawo ezivalekileyo ezikhuselekileyo ezenziweyo, kunye nokubonakala kwazo okukhulu.
Iingcingo zekhonkco zekhonkco zinokudityaniswa kwezinye iintlobo zocingo. Kumzekelo esinawo apha, iintsimbi zentsimbi zidityanisiwe kumalungu athe nkqo anyusa ukhuseleko, anika ukhuseleko ngakumbi, kwaye abonelele ngokuthembeka okungaphezulu kolwakhiwo kwinkqubo yekhonkco yekhonkco. Ukungathethi, ukutshiza kombala yinto eyamkelekileyo yobuhle.
Iingcingo zocingo ezinje ngezi zibonelela ngokubonakalayo okumangalisayo kunye nokhuseleko olunesidima kwiindawo ezibiyelweyo. Bomelele, banobomi obude, kwaye bafuna ukulungiswa okuncinci ukuba nje sele kuthathwe amanyathelo okuthintela umhlwa ongafunekiyo.
Lo mzekelo uneengcingo ezigutyungelwe yipeyinti ekhuselayo eyenza ukuba uhlobo locingo olusele lukhona luhlale ixesha elide.
Iingcingo zokubiya zihlala zisetyenziselwa indawo yezolimo kunye neendawo zasemaphandleni. Zixhaswa ikakhulu luxinzelelo phakathi kweentambo, zisolulwa kwaye zilukiwe kwaye zixhaswe zizithuba zolwakhiwo kwaye ngamanye amaxesha iziporo ezihamba phakathi kwezithuba.
Ezinye zenziwe ngentsimbi epholileyo kwaye enye, i-iron eqine kakhulu. Kananjalo, zibiza iindleko kwaye zifumaneka lula.
Akukho kangako ucingo njengokungabikho kolunye, iingcingo ezingabonakaliyo zisebenza ngokuhambisa ithowuni yesilumkiso elandelwa ngumbane wombane ocolekileyo ngocingo olungaphantsi komhlaba xa isilwanyana siwela umda obekiweyo obekwe lucingo olungabonakaliyo.
Ezi ntlobo zokuvalelwa ziluncedo ekufumanekeni, kubhetyebhetye, kunye nokubonakala okungenakuthelekiswa nanto okubonelelwa kukungabikho kophazamiso. Fumana ulwazi oluthe kratya malunga ucingo lwezinja oluthandwayo Apha.
Kwizindlu zezinja okanye iindawo ezisetyenziselwa ukuhlala inani elikhulu lee-canines, ucingo lwekhonkco lwamakhonkco lunokusetyenziswa njengeengcingo zenja. Isitshixo sokwenza ukuba olu hlobo locingo lusebenze kakuhle njengocingo lwenja kukuqinisekisa ukuba izithuba zokwakha zomelele kwaye ukuphakama kocingo ngokwalo kukwinqanaba lokuba izinja azikwazi ukutsiba ngaphezulu kwalo.
Kukho indlela yesiNtu yokubeka uthango oluqinileyo lwezinja zasekhaya. Iingcingo zezinja ezinje ngale zicwangciswe kwindawo ebiyelweyo ngokwenyani zandisa ngaphakathi kocingo kunye nokubonelela izinja ngokubonakala okukhulu kunye nenkululeko.
Ezi ntlobo zocingo lwesilwanyana sasekhaya ziyangqubeka kwaye ziphatheka ngokwaneleyo ukuba zisetyenziswe nangaphakathi endlwini. Kufuneka iqatshelwe nangona kunjalo ukuba iintlobo ezinkulu zenja ngokwesiqhelo azifanele zifakwe kwezi ntlobo zocingo lwenja.
Ucingo lwenja oluboniswe ngentla apha lwakhiwe ngesinyithi esidityaniswe ngomgubo wesinyithi. Zombini ziyamelana nemozulu kwaye zinokusongwa zithe tyaba ukuze zigcinwe zize zihanjiswe. Fumana ulwazi oluthe kratya malunga noku ucingo inja metal Apha.
Ifana nocingo olungabonakaliyo, iingcingo zenja ezingenazingcingo ngokuqinisekileyo azizocingo konke konke. Iikhola zeenja ziphindwe kabini njengezisasazi kwaye zibotshelelwe kumqondiso wombane okhutshwe kwindawo ethile endlwini. Ukuba isilwanyana siyaphambuka kumgama othile kummisi, ikhola yaso iya kukhupha umbane kancinci ukuthintela inja ukuba iqhubeke.
Omnye umzala osondeleyo wocingo olungabonakaliyo, ucingo lwezinja zombane yinguqulelo engaphezulu komhlaba yocingo olungabonakaliyo. Ngokwesiqhelo, ibrashi enye engafunekiyo kunye nazo naziphi na iingcingo ezishushu zihlala zinqanda inja ukuba isondele kwezi ndidi zokuvalela kwakhona.
Iingcingo zokhuselo zihlala zisetyenziselwa ukugcina abasebenzisi okanye abahamba ngeenyawo kwiindawo ezinokuba yingozi. Zisetyenziswa kwiindawo zokwakha, kumhlaba oyingozi, kwaye, kule meko, iindawo zokuhlala ezikufuphi namanzi afana nemilambo okanye amachibi.
Ucingo olubiyelweyo locingo olumnyama olusebenzisiweyo apha kukugcina abahlali bangazulazuli kufutshane nomlambo, ngakumbi xa benabantwana.
Iingcingo zethutyana zihlala zisetyenziselwa imida yeziganeko zangaphandle, ukugcina abahamba ngeenyawo behamba kwiindawo ezithintelweyo, kunye nolawulo lwenomyayi lwangaphandle ngokubanzi. Kwifom yabo esetyenziswa ngokuxhaphakileyo, zenziwe ngeemodyuli ezi-2 m ezinde ezidityanisiweyo kunye nesixhobo esakhelwe-ngaphakathi kunye nelokhi kumacala abo.
Kulo mzekelo, iingcingo zisetyenziselwa ukugcina abahambi ngenyawo bengenyuki kwindawo yengca ecaleni kwendlela.
iingoma zomdaniso zomgca wemitshato
Olu cingo luncinci lwexeshana lwenziwe ngesakhelo esimhlophe esimnyama esimhlophe esenziwe ngomgubo kunye nesitayile ukuze sibonakale njengothango olumhlophe lweepikethi ngeenjongo zobuhle. Kulo mfanekiso, sibona ukusetyenziswa kwawo kwindawo yokuhlala ukuvimba indawo eyadi yabo eyenzelwe ukusetyenziswa kwenja yabo yendlu.
Ucingo oluboniswe kumfanekiso ongentla lwenziwe nge-pvc ehlala ixesha elide kwaye lunokufakwa ngokulula ngokutyhala izikhonkwane emhlabeni. Izinto ezinganyangekiyo kwimozulu aziyi kurusa okanye zonakalise kwaye zilungele igadi okanye zahlule indawo eyadini.
Ucingo lwamachibi lubalulekile ukugcina iindwendwe ezingafunekiyo, ukukhusela abanye ekonzakaleni, kunye nokunikezela ngemfihlo. Jonga eyethu izimvo zocingo lwedike iposi yokwehla kwamaxabiso echibini ngohlobo kunye nezinto ezilungileyo nezingalunganga zezona ndlela zithandwa kakhulu zokubiya.
Ucingo olusezantsi kwimigca yentsimbi epeyintiweyo emnyama engwevu emaphethelweni edama lokuqubha kunye nomgangatho wethayile yelitye lentlabathi. Umbala omnyama uphantse wabuyela ngasemva, uvumela umbono ocacileyo wezinto eziluhlaza macala onke echibini.
Ucingo lweglasi olujikeleze iphuli yangasemva yenye yeendlela ezilungileyo zokugcina abantwana bekhuselekile ngelixa bedlala engceni. Ukusuka emanzini echibini oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nophahla lwesitena esibomvu, ucingo lweglasi, olunezithuba zentsimbi ezincinci phakathi, zibonelela ngokucacileyo ngengca.
Eli phuli lilikhulu elakhiwe ngendlela engaqhelekanga emveni kwendlu libonisa ithambeka elibanzi leethayile zesanti enesitulo esinezihlalo ezininzi ezisasazeke ngokungaqhelekanga kwiindawo ezipokothwayo. Umhlaba wonke ujikelezwe ngocingo olumnyama olucekeceke ngentsimbi, olwenziwe kwizithuba ezilula ezimileyo, ukhusela indawo kubantu bangaphandle ngelixa usabonelela nangaphandle.
Idama elincinci lokuntywila linqamlezwe ngocingo oluthe tyaba ngomthi kumjikelezo walo. Umbala womthi ofudumeleyo uyadibana nesitayile seAsia embindini, ehonjiswe ngezityalo ezahlukileyo zebotyi, kunye nethayile yelitye efudumeleyo esetyenziselwa umgangatho wethambeka. Ucingo lubekwa ngendlela eya kuvumela umoya kunye nokukhanya ukuba kudlule phakathi kwezikhewu phakathi kweeplanga zomthi.
Eli chibi le-curvilinear libonisa ukugqitywa komgangatho wekhonkrithi ogqityiweyo, kunye nezihlalo zokuphumla kunye nezityalo ezinamanzi ezijikelezileyo. Ucingo oluphezulu lwentsimbi, lubhalwe ngombala omnyama mnyama, ulayini wonke umda wethambeka, ukhusela indawo kwabo banxaxhileyo kodwa uvumela umbono omkhulu wangaphandle.
Isiziba sedama elinombala obomvu ofudumeleyo ojikelezwe ngaphakathi nocingo olumhlophe olucwecwe ngentsimbi. Ucingo lubude obuphakathi, kwaye iiposti eziphambili ziyekiswa kwindawo ebiyelweyo. Phakathi, amacandelo e-tubular atyebileyo asethwe nkqo kunye nezikhewu ezincinci phakathi.
Imigca yocingo lwentsimbi engwevu emnyama epeyintiweyo yomda wethambeka ledama lokuqubha. Yenziwe kumacandelo e-tubular athe nkqo, ucingo lincinci, lukhuselekile, kwaye luvumela umbono wangaphandle.
Ithafa ledama lokuhlambela linendawo yokuhombisa yamatye eengqayi enezitena ezibomvu eziphezu komphetho wamanzi. Ithala lihlotshiswe ngefanitshala yangaphandle ngombala omhlophe noluhlaza okomnyama.
Iingcingo zefama ziza ngeendlela ezahlukeneyo, ezona zidume kakhulu neziqhelekileyo zezocingo olumhlophe olusisigxina. Ngaphezulu kokugcina abangeneleli ngaphandle, ezi ntlobo zocingo zilungele ukugcina nayiphi na imfuyo ejikelezayo kumhlaba wefama.
Iimodyuli ezininzi, iintlobo eziguquguqukayo zocingo lwasefama ziye zafumaneka ngohlobo lwezinto zokubiyela ezinamathelayo zentsimbi. Olu hlobo lunokusetyenziswa xa kufuneka kwenziwe uhlengahlengiso rhoqo kwiindawo ezibiyelweyo. Oku kudla ngokuba yimeko yokutshintsha kwenani lemfuyo ekufuneka ihanjisiwe kwaye ijikelezwe.
Ukwahlula ucingo lukaloliwe obelukude kangangeenkulungwane luqhele ukusetyenziselwa iinjongo zokuhombisa kunye nezinto ezisebenzayo ezidityaniswe nezixhobo ezahlukeneyo ezifanelekileyo injongo. Ucingo loololiwe olwahluliweyo lukhetho oludumileyo lokusetyenziswa kwezolimo kunye nokuhombisa.
Ucingo loololiwe olwahluliweyo luluncedo ngakumbi kumhlaba onzima okanye onamatye kuba ulwakhiwo lwawo aludingi mingxunya yeposi ukuba yakhiwe ngoyilo lwe-zig zag. Banokwakhiwa ngaphandle kwezikhonkwane okanye ezinye iintlobo zekhompyuter ezenza ukuba zilungele ukuphuma kwindawo apho izixhobo zinqabile.
Ukwahlula iindleko zoLoliwe zoLoliwe
Iindleko zocingo lukaloliwe olwahluliweyo ziya kuxhomekeka kuhlobo lwemathiriyeli oyikhethileyo. Ngokubanzi, umsedare kunye nompayina omthubi zibiza kancinci ukuthenga. Umsedare unokubiza ukusuka kwi- $ 12- $ 16 ngeenyawo, ngelixa ipayini ibaleka ukusuka kwi-12- $ 20. Ukubiyelwa ngokudibeneyo kuya kuhlala kusuka kwi-20- $ 25 yeenyawo zomgama.
Kulabo bajonge ukugcina kwiindleko zokufaka kwaye uzenzele ngokwakho amaxabiso aphakathi kwezixhobo kuphela:
Umda woLoliwe oMbiweyo wokwahlula i-1100- $ 1300
Mid-Range Split Rail Fence $ 1300- $ 1500
Umgangatho ophezulu woLoliwe woLoliwe oPhezulu $ 1400- $ 1900
(Qaphela ukuba isixa esidweliswe ngasentla sibalwa ngeenyawo ezili-164 zokulinganisa ucingo)
Imida yomda kaloliwe ingena ngqo ngaphakathi. Yenziwe ngeentsika zomthi ezinzima ezifumanekayo, iityili zangaphakathi zibonisa ukukhanya, indidi ende, efakwe phakathi kwezithuba eziphambili. Ngokuhambelana nomxholo we-rustic cottage, ipatio yegadi yenziwe ngamatye e-cobblestones, kunye nengca evunyelwe ukuba ikhule phakathi.
Ukuba lihlathi kanye ngasemva kwalo, esi sithuba sesahlulo kunye nocingo lukaloliwe senziwe ngomthi ofanayo, osuswe kwalapha kwimithi engasemva. Ucingo locingo olwahluliweyo lunemikhondo ebaluleke kakhulu, apho kungene khona iileyili. Olu hlobo locingo luyamangalisa kwaye luyinto erustic, kodwa yindlela elula yokubeka imiqobo emininzi.
Olu cingo lwesimbo luhle kakhulu luhamba kakuhle nembonakalo yekhephu kunye nokubukeka kwebarnyard yeklasi enophahla oluphezulu olubomvu kunye neendonga ezimhlophe ezimhlophe. Ucingo lubonisa iiposti ezahlulwe ngokulinganayo kwaye zenziwe ngababini.
Phakathi kwezithuba, kunikwa brace ukugcina iiposti zithe nkqo, kwaye iileyili zokugada zibekwa kwezi brace. Isango eliphambili lenziwa nangefashoni elula, iileyili ezingqameneyo ezinomnqamlezo onqamlezileyo macala omabini eposi.
Le ndawo yangasemva ekhokelela ehlathini ikhuselwe kusetyenziswa iposti yocingo lukaloliwe. Olu cingo lwenziwe ngamaplanga awenziwe ngebala amhlophe. Izithuba eziphambili zigxunyekwe emhlabeni, kunye neziphelo ezingaphezulu zivalwe zaza zangqinwa. Iiposti ziye zitshixiwe, ukuze iileyili ezithe tyaba zifakwe phakathi. Olu hlobo luqhelekileyo locingo lucacisa umhlaba ngokukhuselekileyo ngaphandle kokuthatha indawo engqongileyo yendalo.
Esi sithuba kunye nocingo lukaloliwe kumisa nje le ndlela intle yasekhaya yakudala kwindlela ephambili yelizwe. Inemizila emibini kuphela engafakwanga phakathi kweepali ezomeleleyo, ucingo lunezinto ezongezelelekileyo ezixhasayo phakathi komgaqo, kunye noluhlu lwamatyholo kanye emva kocingo.
Ezi zongezo zinobuqili zongeza ukhuseleko ngaphandle kokususa ukubukeka kwendalo kwipalamente emibini kunye nocingo lukaloliwe.
Ukubaleka kwindlela yelizwe eyenziwe ngomhlaba, iposti elula kucingo lukaloliwe imisa umgca wepropathi, ecaleni kwemiqolo yemithi yeArbor. Iipili eziqinileyo azifakwanga kwimingxunya kwezona ndawo ziphambili zocingo. Ukuguga kunye namabala emithi emhlophe epeyintiweyo kunika ucingo istayile sebarn vibe.
Ukwahluka kocingo olubiyelweyo, uyilo locingo oluhlabayo ziyimveliso yoHlaziyo lweMizi-mveliso lwenkulungwane edlulileyo. Oku kusetyenziswa kuqoqosho nakubuchule bocingo lomhlaba kunye neendawo zezolimo.
Zenziwe ngeengcingo ezimbini zentsimbi eziphothiweyo ezijijekileyo kunye neentsimbi zentsimbi eziqhotyoshelwe rhoqo nge-10-20 cm. Zibanjwe ziingceba ezomeleleyo zeposti ezenziwe ngomthi ezikhutshiweyo ezomeleleyo ngokwaneleyo ukubamba indawo yazo.
Ngaphandle kwezithintelo ezibonakalayo ezibonakalayo kubo nabaphi na abangeneleli abangafunekiyo, iingcingo ezihlabayo zisondele ekubeni luphawu lokugcina abantu bepropathi yethu. Ngokwesiko, nabani na obona iingcingo ezihlabayo uya kunyanzelwa ukuba aphume kuloo ndawo ibiyileyo.
Xa ujonga iintlobo zocingo lwamahashe oya kuthi uzibeke, ukhuseleko lwee-equines zakho ezivalelweyo kufuneka lube phezulu kuluhlu lwakho lwezinto eziphambili. Iingcingo zamahashe eziqhelekileyo ezinje ngale zenziwe ngeentsika zomthi ezenziwe ngomthi kunye neentsimbi, ezinomphakamo othintela amahashe atsibatsiba ngaphaya kwendawo ebiyelweyo.
Ezi ntlobo zocingo zihlala zijikeleza umjikelezo wamabala amakhulu avulekileyo angaphandle. Kananjalo, ulwakhiwo kunye nezinto zokwakha kufuneka zibize iindleko kunye nokuhlala ixesha elide. Umthi oqhelekileyo wasekhaya osetyenziselwe ezi fence lukhetho olufanelekileyo kulwakhiwo olufikelelekayo kunye nokusebenza okuqinileyo kunye nokuhlala ixesha elide.
Ukuvalela okuncinci, ukubiyela kwesinyithi okupeyintwe ngaphezulu ukukhusela kurusi kunye nokubukeka kunokusetyenziswa ngokuchasene nokubiyela okuqhelekileyo. Ezi ndawo zivaliweyo zesinyithi zilula kwaye zomelele, singasathethi ke ngolondolozo olusezantsi ngokumangalisayo kunye nokuhlala ixesha elide.
Njengoko igama lisitsho, iingcingo zamaxhama zisetyenziselwa ukulawula ukuhamba kunye nokuzula kweepateni zommandla okanye iinyama ezifama. Kulo mzekelo, intambo yentsimbi yocingo kukugcina nayiphi na inyamakazi engazukungena ekungeneni kwifama yemifuno yomnini kunye nokutya imveliso.
Ngaphandle kokugcina nakweyiphi na indawo, ezinye iingcingo zexhama zisetyenziselwa ukugcina iinyamakazi kwiindawo ezichongiweyo zomdla. Ezi zihlala zisetyenziswa kwiifama zexhama okanye kulondolozo lwendalo. Iingcingo zexhama zigcinwa zomelele kwaye ziphakamile kuba uninzi lweengcingo ezimfutshane ezinokuphakama zinokutsiba ngokulula ngexhama.
Uyilo lwexeshana locingo lusetyenziselwa iiprojekthi zolwakhiwo, ukudibanisa iindawo kwimisitho yoluntu, ukuthintela ubusela okanye ukhuseleko. Iindidi eziqhelekileyo zokubiya okwethutyana zibandakanya, iplastiki, ikhonkco lokudibanisa, intsimbi okanye ucingo.
Ucingo olukumfanekiso ongentla luza nee-pickets ezi-6 ze-fiberglass kunye ne-25ft yocingo. Lukhetho olufanelekileyo lokucoca indawo yegadi njengoko isiza kunyangwa ngearhente yokukrakra ukunceda ukuthintela izilwanyana ekuhlafunweni. Funda ngakumbi malunga noku ucingo lwepokotho okwethutyana Apha.
Ucingo oluyintili, ngamanye amaxesha olubizwa ngokuba lucingo lokucoca ulwelo, yindlela yokulawula intlenge esetyenziselwa ukukhusela umgangatho wamanzi kwimizimba yamanzi ekufuphi nakwintlenga nakwezinye izinto ezingafunekiyo ezifumaneka kumanzi emvula. Zihlala zisetyenziswa kwiindawo zokwakha ubukhulu becala.
Ucingo lwekhephu lubiyele ukubethwa ngumoya, lukhukulise ikhephu kwaye lubanyanzele ukuba baqokelele ngaphandle nje kwendawo ebiyelweyo. Ezi ntlobo zocingo lwexeshana zisetyenziselwa ukugcina ikhephu ngaphandle kweendlela kunye neendlela ezingaphandle ngexesha lekhephu.
Iingcingo zokwakha ziludidi olungaphantsi lwazo zombini iingcingo zethutyana kunye neengcingo ezikhuselekileyo. Zime simahla kwaye ziyazixhasa kwaye zihlala zisetyenziselwa ukubonisa ukuthintelwa okanye iindawo zokulumkisa kwindawo yokwakha. Ukubonakala kwezi zicingo kusephezulu kangangokuba abantu basazi ukuba yintoni ebasemva kocingo.
Njengakulo mzekelo, iifowuni zokwakha zisetyenziselwa ukubonisa ukuba indawo iyingozi kakhulu ukungena. Banokubonisa ukuhla kwamatye, umhlaba ovulekileyo, okanye iimeko ezingazinzanga zomhlaba.
Iingcamango ezingama-65 zePatio Design - Iingcamango ezingama-50 zeDisk Design - Uyilo lweBrick Patio - Uyilo lweNdlela yokuhamba
PetSafe Wireless Kucingo olubiyele Pet Containment S… $ 259.95$ 299,99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-8648 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ibhendi yeWamBam WF29001 igadi idibene… $ 80.13 umthengisi ogqibelele (439) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iimveliso zangaphandle zeZippity ZP19001 Madison Viny… Iidola ezingama-68.80 umthengisi ogqibelele (1214) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iimveliso zangaphandle zeZippity ZP19002 Fence Ne… $ 99.35$ 109.99 umthengisi ogqibelele (364) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
ilokhwe yomtshato yobusuku eliti
iilokhwe zomtshato ezithengiswayo kufutshane nam
isipho seminyaka emi-3
izipho zokukhumbula umtshato zonyaka omnye